အပူပိုင်းဒေသ Update: Isaias ဟာဟာရီကိန်းအမျိုးအစား ၁ ဖြစ်နေဆဲ subtitles August 10, 2020
အပူပိုင်းဒေသ Update: Isaias ဟာဟာရီကိန်းအမျိုးအစား ၁ ဖြစ်နေဆဲ subtitles
မိနစ်များ။ မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့ မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့ညာ မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဖြောင့် မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတစ် ဦး က မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအနည်းငယ် မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအနည်းငယ်သာအိတ်ကပ် မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာ၏အနည်းငယ်အိတ်ဆောင် မိနစ်များ။ သို့သော်အခုအချိန်မှာအနည်းငယ်သောလေးလံသောအိတ်ဆောင် မိနစ်များ။ သို့သော်အခုအချိန်မှာအနည်းငယ်မိုးအိတ်ကပ်အနည်းငယ် မိနစ်များ။ သို့သော်အခုအချိန်မှာမိုးအနည်းငယ်ရွာသောအိတ်ကပ်အနည်းငယ် မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၏အိတ်ကပ်အနည်းငယ် မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၏အိတ်ကပ်အနည်းငယ် မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၏အိတ်ကပ်အနည်းငယ် မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းအနည်းငယ်အိတ်ကပ်ထဲမှာသိပ်မရှိပါဘူး မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာမိုးနည်းရွာတဲ့မိုးနည်းနည်းလေးအိတ်ကပ်တွေကမက်ထရိုမှာသိပ်မများပါဘူး မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ငယ်အနည်းငယ်သည်မက်ထရိုမဟုတ်သော်လည်းသို့သော် မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ငယ်အနည်းငယ်သည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများလှသော်လည်း ထပ်မံ၍ မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာမိုးနည်းတဲ့မိုးနည်းနည်းလေးအိတ်ကပ်အနည်းငယ်ကမက်ထရိုမက်ထရိုမှာသိပ်မများလှပေမယ့်ထပ်မံ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းသို့သော်ဆန့်ကျင်တစ်ခုဖြစ်သည် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်သာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်သောဆန့်ကျင်မှု မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်နည်းနည်း ထပ်မံ၍ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်နည်းနည်း ထပ်မံ၍ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်နည်းနည်း ထပ်မံ၍ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်ဤမျှလောက်မများပါ၊ သို့သော်အနည်းငယ်သာ ထပ်မံ၍ ပို၍ ဆိုးသည် မက်ထရိုထဲမှာအများကြီးပေမယ့်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် SO သို့ဆင်း မက်ထရိုမှာအများကြီးပေမယ့်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ်ဒီနည်းကိုဖွင့်ကြကုန်အံ့ မက်ထရိုတွင်အများကြီးရှိပေမယ့်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ်ဒီတော့ဒီနည်းကိုရဲ့အာရုံစိုက်ပါစေ မက်ထရိုတွင်များများစားစားအနည်းငယ်သာဆန့်ကျင်သည်အနည်းငယ်သာထပ်မံလေ့လာကြည့်ရအောင်။ မက်ထရိုတွင်များများစားစားအနည်းငယ်သာဆန့်ကျင်သည်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ထပ်မံလေ့လာကြည့်ပါ ဦး ON ၏အာရုံစိုက်မှု မက်ထရိုတွင်များများစားစားဆန့်ကျင်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ်ဒီတော့ဒီနည်းကို၏အာရုံစိုက်ပါစေ အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့ အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့။ အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့။ ထပ် အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့။ ထပ်, ဒီနည်းကို ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီနည်းကို ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီဆက်ပြောသည် ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီအဆက်တည်ငြိမ်သောလေ ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီဆက်ပြောဒီလေတိုက်လိမ့်မည် ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်ပါလိမ့်မယ် Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်ပါလိမ့်မယ် Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ် 'S ဖွင့်ပါလိမ့်မယ် Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်ရဲ့ထားပါလိမ့်မယ် Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်သောချထားကြလိမ့်မည် Hurricane ။ ထပ်မံ, ဒီတည်ငြိမ်သောလေတိုက်နှုန်းအမှန်တကယ်ဖွင့်ချထားပါလိမ့်မယ် Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်အဲဒီမှာဖွင့်ထားကြလိမ့်မည် Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်နှုန်းအမှန်တကယ်အဲဒီမှာဖွင့်ထားကြလိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရေရှည်တည်တံ့သောလေများအမှန်တကယ်ရှိစေခြင်းငှါဖွင့်ထားပါစေ ရေရှည်တည်တံ့သောလေများအမှန်တကယ်အားဖြင့်အဲဒီမှာဖွင့်ထားကြကုန်အံ့ တည်ငြိမ်သောလေများသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့် ၁၁း၀၀ တွင်ဖွင့်ချနိုင်သည်။ တည်ငြိမ်သောလေတိုက်ခတ်မှုသည် ၁၁း၀၀ အကြံပေးသောကြောင့်၎င်းအားဖွင့်ချပေးလိမ့်မည်။ ရေရှည်တည်တံ့သောလေတိုက်ခတ်မှုသည် ၁၁း၀၀ မှအကြံဥာဏ်ရှိသဖြင့်၎င်းအားထည့်သွင်းကြပါစို့။ ရေရှည်တည်တံ့သောလေတိုက်ခတ်မှုသည် ၁၁း၀၀ တွင်အကြံဥာဏ်ရှိသဖြင့်၎င်းအားထည့်သွင်းပါစေ။ အဲဒီမှာဖွင့်ကြကုန်အံ့ 11:00 အကြံပေးချက်ရှိသည် အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကြောင့် 11:00 အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည်အကြံဥာဏ်ရှိသည် အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 11:00 အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပိတ်သောလေတိုက် အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကွောငျ့ 11:00 အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အကြံဥာဏ်မှန်ကန်သောလေတိုက် အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကွောငျ့ 11:00 အကြံပေးချက်ယခုအချိန်တွင်တည်ငြိမ်သောလေတိုက်လေပြီ အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကွောငျ့ 11:00 အကြံပေးချက်ယခုအချိန်တွင်တည်ငြိမ်သောလေတိုက်လေပြီ အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သော 11:00 အကြံပေးချက်ယခုအချိန်တွင် 80 မှာအသက်မသေနိုင်သောလေပြင်းများတည်ရှိပြီးသောလေတိုက်ရှိသည် THE 11:00 အကြံပေးချက်ကိုယခုအချိန်တွင် 80 မှာတည်ငြိမ်သောလေတိုက်သည် THE 11:00 အကြံပေးချက်ယခုမိုင် 80 မှာအခုအချိန်မှာတိုက်တည်ငြိမ်လေပြီ ၁၁း၀၀ တွင်အကြံပေးချက်သည်မိုင် ၈၀ နှုန်းဖြင့်ယခုအချိန်ထိတိုက်ခတ်နေသောလေများရှိသည်။ THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်တစ်နာရီလျှင်မိုင် ၈၀ တွင်မှန်ကန်သောတိုက်ပွဲများရှိသည်။ ၁၁း၀၀ တွင်အကြံပေးချက်သည်မိုင် ၈၀ ခန့်တွင်ယခုအချိန်ထိတည်တံ့သောလေများရှိသည်။ THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်ယခုအချိန်တွင်မိုင် ၈၀ ခန့်တွင်အရှိန်အဟုန်ပြင်းသောလေတိုက်ခတ်နေပြီဖြစ်သည်။ THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်ယခုအချိန်တွင်မိုင် ၈၀ နှင့်အဝေးပြေးလမ်းတစ်လျှောက်တွင်တိုက်ဖျက်သောလေများရှိသည်။ THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်ယခုအချိန်တွင်မိုင် ၈၀ ခန့်တွင်တည်ရှိပြီးသောတိုက်လေယာဉ်များနှင့်ရုတ်တရက်ပျက်စီးသွားသောအခြေအနေများဖြစ်သည်။ အခုအချိန်မှာအဆင်သင့် Window တစ်နာရီမိုင် ၈၀ နဲ့ AND ည့်သည်တွေအတွက် အခုအချိန်ထိဆက်တိုက်တိုက်နေသည့်မိုင် ၈၀ တွင်တစ်နာရီလျှင်မိုင် ၁၀၀ အထိရှိပြီး၊ အခုအချိန်ထိမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုမိုင် ၈၀ ခန့်ရှိပြီးတစ်နာရီလျှင် ၁၀၀ အထိမိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးမှာရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်ရေမိုင် ၈၀ တွင်တစ်နာရီလျှင်မိုင် ၈၀ အကွာအဝေးရှိပြီးယခုအခါ ၁၀၀ သို့ရောက်သော THE ည့်သည်များ။ အခုအချိန်အထိရေမိုင် ၈၀ မှာအရှိန်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်နေပြီးတစ်နာရီလျှင်မိုင် ၈၀ နှုန်းနှင့်လူ ၁၀၀ အထိအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်။ အခုအချိန်ထိရေမိုင် ၈၀ ခန့်ရှိပြီးတစ်နာရီကို ၁၀၀ မိုင်နှုန်းသာရှိပြီးလက်ရှိအခြေအနေ ၁၀၀ ။ အခုအချိန်ထိဆက်တိုက်တိုက်နေသည့်မိုင် ၈၀ တွင်တစ်နာရီလျှင် ၁၀၀ သို့မိုင်ပေါင်း ၁၀၀ အထိအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရောက်ရှိနေသည်။ မှန်သည်။ ၉၀ ။ အခုအချိန်အထိရေရှည်မိုင် ၈၀ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပြီးတစ်နာရီကို ၁၀၀ အထိအနိမ့်အမြင့်များမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နာရီမိုင်နှုန်း ၁၀၀ လောက်ရှိမယ့်သူတွေအားလုံးကိုသွားမယ်။ အရင်အစောပိုင်း ၉၀ နှစ် တစ်နာရီမိုင်နှုန်း ၁၀၀ လောက်ရှိမယ့်လူတွေအားလုံးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အရင် ၁၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀ နှစ်ပြည့် တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့ THE ည့်ခန်းတွေ ၁၀၀ အထိ။ မနက်စောစော ၉၀ ပြည့်မယ်။ တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့ THE ည့်ခန်းတွေ ၁၀၀ အထိ။ တကယ့်အစောပိုင်း OR ၉၀ ။ တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့လူ ၁၀၀ ကိုဖြတ်သွားမယ့်သူတွေရှိတယ်။ အရင် ၁၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀ ရမယ်။ ဒါကနည်းနည်းလေးကြာပြီ။ တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့လူ ၁၀၀ ကိုဖြတ်သွားမယ့်သူတွေရှိတယ်။ အရင် ၁၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀ ရမယ်။ ဒါကနည်းနည်းလေးပိုပြီးအားကောင်းတယ်။ 100. THE GUST အစောပိုင်း OR 90. ဒီနည်းကိုပြန်နည်းနည်းအားကောင်းတဲ့ ၁၀၀. တာဝန်ကျေပွန်ပါသို့မဟုတ် ၉၀ ။ ၁၀၀။ တာ ၀ န်ရှိသူဟောင်း ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တောင်မှအားနည်းတဲ့အခြေအနေတောင်မှ ၁၀၀။ တာ ၀ န်ရှိသူဟောင်း ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုပြန်ကြည့်ရင်နည်းနည်းလေးပိုပြီးအားကောင်းပါတယ် ၁၀၀။ တာရှည်စော ၉၀ ။ ဒါကနည်းနည်းလေးပိုခက်တယ်တောင်မှမသိဘူးတောင်မှဒီတစ်ခါတော့ 100. ပို့တဲ့အစောပိုင်း (သို့) ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုမပြနိုင်ရင်တောင်မှအင်အားကြီးမားသောအလား ၁၀၀. တာဝန်ကျတဲ့အစောပိုင်း (သို့) ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုပြန်မပြောဘဲနေရင်တောင်မှအင်မတန်အားကောင်းတဲ့အရာပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲမပြသသော်လည်းအနည်းငယ်အားကြီးသော ထပ်မံအင်အားကြီးမားသောအနေဖြင့်တောင်မှ၎င်းသည်လုံးဝမပြနိုင်သော်လည်း ထပ်မံအင်အားကြီးမားသောအရာတောင်မှ၎င်းသည်အတော်အတန်သော်လည်းမပြသသော်လည်း ထပ်မံအင်အားကြီးမားသောအရာတောင်မှ၎င်းသည်အတော်လေးသေးမပြသသော်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲအနည်းငယ်သာခိုင်မာတောင့်တင်းသော်လည်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲအနည်းငယ်သောခိုင်မာတောင့်တင်းမှုရှိသော်လည်း၎င်းကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်း တောင်မှဒီအစဉ်အဆက်အတော်လေးတက်မပြသ SUSTAINED ၌တည်၏ ဒီသတင်းတောင်မှအဆက်မပြတ်သောအခြေအနေများတွင်တောင်မှအတော်အတန်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါ ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါထင်တယ် ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါသူတို့ထင်ခဲ့တယ် ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါထင်လိမ့်မယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါထင်လိမ့်မယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ CONE ကိုရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့က Cone တစ် ဦး ကိုရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ CONE အနည်းငယ်ရွှေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ CONE အနည်းငယ် BIT ကိုရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့က CONE အနည်းငယ် BIT ရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် NOW က Wind ။ ငါသူတို့က CONE အနည်းငယ် BIT ရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် NOW က Wind ။ ငါသူတို့ CONE အနည်းငယ် BIT ကိုရွှေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် NOW က Wind ။ သူတို့သည်အ ၀ ိဇ္ဇာအနိမ့်အမြင့်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်၊ NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Conse အနည်းငယ်ကိုက်တဲ့အနောက်ဘက်မှရွေ့လျားလိမ့်မယ်, စဉ်းစားပါလိမ့်မယ် NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Cone အနည်းငယ်ကိုက်တဲ့အနောက်ဘက်မှကိုက်, ရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Cone အနည်းငယ်ကိုက်သောအနောက်နိုင်ငံများသို့သွား, လမ်းကြောင်းရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Cone အနည်းငယ်ကိုက်နဲ့အနောက်ဘက်ကိုက်, လမ်းကြောင်းတစ် ဦး MOVE လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် Cone အနည်းငယ်ကို BEST သို့ရွှေ့ပါ။ A ကိုရွှေ့ပါ ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ အနည်းငယ်သောလမ်းကြောင်းကိုရွှေ့ပါ ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုရွှေ့ပါ အကန့်တစ်ခုမှအနည်းငယ်သောအရာ ၀ တ္ထုကိုရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုအနောက်သို့ရွှေ့ပါ ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်ဘက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုအနောက်သို့ရွှေ့ပါ အနောက်ဘက်, လမ်းကြောင်းနည်းနည်းအနီရောင်သို့ပြောင်းပါ အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့ အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့မရှိခဲ့ဘူး အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါ 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် .... လုပ်သင့်တယ် 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် .... လုပ်သင့်တယ် 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါရွှေ့ပြီ 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီရွှေ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကိုရွှေ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်သောရွှေ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်သောရွှေ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကအလွန်သေးငယ်သော BIT သို့ရွှေ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်တဲ့ BIT မရွှေ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကအလွန်သေးငယ်သော BIT မဟုတ်ပါ MOVE ကြလိမ့်မယ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်တဲ့ကိုက်မဟုတ်ဘဲသေးငယ်တဲ့အိုင်တီရွှေ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်တဲ့ BIT ကို AT တန်ချိန်မဟုတ်ပါရွှေ့ခဲ့ကြလိမ့်မယ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီအနည်းငယ်ရွှေ့ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုမှာတစ်တန်မဟုတ် 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ဒါပေမဲ့ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ဒါပေမဲ့ IN ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ဒါပေမဲ့မဆို ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အိုင်တီပါပဲ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အိုင်တီတစ် ဦး ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကြီးမားသော ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကြီးမားသော ဒီနည်းကို POINT ကို AT တွန်းမ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွားနေပြီ ဒီနည်းကို POINT ကို AT တွန်းမ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှု ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာသွားပါ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာသွားပါ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှု EV ည့်သည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာ၌မသွားဘူး မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာသွားမယ့်အခွင့်အရေး မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုOရာမယ့်တောင်မှလက်ျာဘက် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုEVရာမယ့်တောင်မှလက်ျာဘက် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတောင်မှဗဟိုအောက်မှာ စနစ်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတောင်မှဗဟိုအောက်မှာ စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ SO စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ စဉ်းစားပါ စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ SO စဉ်းစားပါ စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ စဉ်းစားပါ ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ စဉ်းစားပါ ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီတော့စဉ်းစားနှင့်အောက်မေ့သတိရပါ ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားနှင့်အောက်မေ့သတိရပါ ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီနည်းကိုသာစဉ်းစားနဲ့သတိရပါ ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်အောက်မေ့သတိရပါ ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီတော့ဒီနည်းကို 70 နှင့်ပတ်သက်။ တစ်ခုသာသတိရပါ ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနဲ့သတိရပါ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကို လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနဲ့သတိရပါ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကို လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်သတိရပါ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်အိုင်တီတစ်ခုလုံးရဲ့ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်အချိန်ရဲ့ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကိုပါပဲ လိုင်း။ ဒါကြောင့်စဉ်းစားပါနှင့်အိုင်တီ THE TIME အိုင်တီ TIME ၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနှင့်သတိပြုပါအောက်ပါအချိန်ရဲ့ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်သတိရပါအောက်ပါကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်သာ လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနှင့်အောက်မေ့သတိရပါအိုင်တီအချိန်၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာအဆုံးသတ်နိူင် လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနှင့်သတိရအောက်မေ့သတိရပါအောက်ပါကာလ၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကိုဖွင့်အဆုံးသတ် ဒါကတစ် ဦး တည်းသောအကြောင်း 70 ခု၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အိုင်တီ၌တည်သောကာလ၏ ဒါကတစ်ခုတည်းသောအကြောင်း 70% ရဲ့အချိန်ရဲ့အိုင်တီတွင်ပင်အဆုံးသတ် ဒါကတစ်ခုလုံးရဲ့ ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်ကအိုင်တီအဆုံးလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ် ဒါကတစ်ခုတည်းသောအကြောင်း ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒီအထဲကအ ၀ ိဇ္ဇာတောင်ထိပ်ဆုံးရောက်နေပြီ ဒါကတစ်နာရီခန့်ရဲ့ ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီအတိုင်းပဲအဆုံးသတ်သွားပြီ။ ဒါကတစ်နာရီခန့်ရဲ့ ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်၊ ဒီနေ့ဟာ ၄ ရက်မြောက်နေ့မှာအ ၀ ိဇ္ဇာတွင်အဆုံးသတ် ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၏တစ်ခုတည်းသောနေ့ဖြစ်သော်လည်း ၄ င်း၏နေ့သည် ၄ ​​င်း၏အချိန်၌ ၄း၃ ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလျှင်သောနေ့သည်အ ၀ ိဇ္ဇာအတွင်း၌အဆုံးသတ်သွားသည် ၄ ​​၃ ၄ ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၏တစ်ခုတည်းသောနေ့ဖြစ်သော်လည်း ၄း၄ တွင် ၄ င်းသည်အ ၀ ိဇ္ဇာတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ၎င်းသည်အချိန်၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလျှင်သော့သည် ၄ ​​င်း၏ ၄ ၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ပြိုလဲသွားသည်။ အချိန်ကပင် UP IN THE Cone ကို AT နေ့'S434နှင့်5အဆုံးသတ်ထားသည်။ ဒီနေ့၏အဆုံး၌ ၄ င်းတို့၏နေ့များသည် ၄ ​​၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်တည်ရှိသည်။ SO ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့၌ CONE ၌အဆုံး၌တည်သောနေ့၏334နှင့်5။ ဒီတော့ဘာ ဒီနေ့ရဲ့အဆုံး၌ ၄ င်းတို့၏နေ့များသည် ၄ ​​၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ရောက်နေပြီ။ ဘာလဲ ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့၌ CONE ၌အဆုံး၌တည်သောကာလ၏334နှင့်5။ ဒီတော့ဘာပြောလိုက်တယ် ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့များသည်ကန္တာရ၌အဆုံး၌တည်သောနေ့၏334နှင့်5။ ဒီတော့သင့်ကိုပြောပြသည် ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့များသည်ကန္တာရ၌အဆုံး၌တည်သောနေ့၏334နှင့်5။ ဒီတော့သင်ပြောပြသည် နေ့၏ ၄၊၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ထိုအရာသည်တောင်ထိပ်တွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပြောသောအရာမှာ ဒီနေ့၏334နှင့်5မှာကွန်း။ ဒီတော့သင်ပြောသောအရာ နေ့၏434နှင့်5မှာကွန်း။ ဒီတော့သင်ပြောသောအရာပင် DAY ၏ ၄၊၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ပြိုကွဲသွားသောအရာဒါဆိုသင်ပြောသောအရာကဘာလဲ ဒီနေ့၏334နှင့်5မှာကွန်း။ ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုသင်ပြောသောအရာဘာလဲဒီတော့ဒီ DAY ၏ ၄၊၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကူစက်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုကြည့်လျှင်သင့်ကိုပြောပြသည့်အရာကဘာလဲ DAY's434AND5ရဲ့ DOW က CONE SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO D D ဒီတော့ဘာလဲသင်ဤပြောပြသည်ပင်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကို IS ဒီတော့ဘာလဲဒီနည်းကိုဒီမျှော်လင့်ချက်မျှော်လင့်ထားဒီနည်းကိုပင် ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ထားသည့်တိုင်ဒီအရှိန်အဟုန်ဟာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပင်။ ဒီတော့ဘာလဲဒီအကြောင်းကိုဒီနည်းကိုဒီအတိုင်းမျှော်လင့်ထားတစ်နေရာရာမှာမျှော်လင့်ထား ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုဒီအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ထားသလောက်ပင်ဒီအကြောင်းကိုလှည့်ပတ်တစ်နေရာရာမျှော်လင့်ထား ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲတစ်ဝိုက်တစ်နေရာ ဒီနည်းနဲ့ဒီမုန်တိုင်းကိုမျှော်လင့်ထားမိတယ်၊ ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE BEACH ပတ်ပတ်လည်နေရာဒေသကိုမျှော်လင့်မထား ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒီနည်းနဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာမျှော်လင့်မထားသင့်သေးတဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရာ ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်တွေ့ကြုံရသည့်အတိုင်းအလုပ်ပြီးမြောက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခြင်း MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်နောက်လမ်း၌အလုပ်လုပ်ရန် MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိလမ်းခရီးတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်အရှေ့ဘက်ဖြတ်ကျော်လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း မျှော်လင့်ထားသည့်နေရာတစ်ဝိုက် MYRTLE BEACH နှင့်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်ကူးသန်းသွားလမ်း၊ MYRTLE BEACH ပြီးတော့အဲဒီလမ်းကအရှေ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးသွားတယ် MYRTLE BEACH AND THORS AND WILLOW CAROLINA အရှေ့ပိုင်းဖြတ်သန်းလမ်း၊ MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WORL CAROLINA ဖြတ်ပြီးလမ်းဖွင့်မယ်။ MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WORL CAROLINA ဖြတ်ပြီးလမ်းဖွင့်မယ်။ MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WOROL CAROLINA ဖြတ်ကျော်ပြီးလမ်းဖွင့်တယ်။ MYRTLE BEACH AND THILL AND WORS သည်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းဖွင့်ပြီး ၁ တွင် ၁ ခုရှိသည်။ MYRTLE BEACH AND THILL AND THELL AND THELL AND THELL AND THELL AND THR AND TRAVEL MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WORAL CAROLINA အရှေ့ဘက်ဖြတ်ကျော်လျှောက်လမ်း၊ အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကာရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကူးတဲ့လမ်း၊ ၃ တွင် ၁ ယောက်ရှိတယ် အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကာရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကျော်တဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှာ ၁ ခုရှိတယ် အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကူးတဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှ ၁ ခုရရှိနိုင်ပါတယ် အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကျော်တဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှ ၁ ခုရရှိနိုင်ပါတယ် အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကာရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ပြီးသွားတဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှ ၁ ခုရှိတယ်။ ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည် ကယ်ရိုလိုင်းနား, အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည် ကယ်ရိုလိုင်းနား, အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည်။ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကယ်ရိုလိုင်းနား, အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည်။ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခု ရှိ၍ ၎င်းတို့အပြင်ဘက်ရှိအရာ ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အပြင်ဘက်ရှိအပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခွင့်အလမ်းကအိုင်တီရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပြင်ကွေး၏အပြင်ဘက်မှာ အခွင့်အလမ်းအိုင်တီရဲ့တစ်နေရာရာရဲ့အပြင်ဘက်တွင် .ES ၏အပြင်ဘက် ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်း။ ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်း။ အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်တွင်ရှိ။ အော။ ဒီတော့နှင့်ပင်လျှင် အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိသူများရဲ့အပြင်ဘက်မှာ။ ဒီတော့ပင်လျှင်ပင် အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပြင်ကအပြင်။ ဒီတော့လျှင်ပင်ပင် အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပြင်ကအပြင်။ ဒီတော့၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင်။ အခွင့်အလမ်းကဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာရဲ့အပြင်ဘက်တွင်အပြင်ဘက်။ ဒီတော့၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင် တစ်နေရာရာ၏အပြင်ဘက်တွင် CONE .SO AND အိုင်တီ၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင် တစ်နေရာရာ၏အပြင်ဘက်တွင်။ EE .SO AND အိုင်တီက Cone ၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင် တစ်စုံတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာ။ ကံဆိုးတယ်။ တောင်မှဒီဟာကကုန်းအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ တစ်စုံတစ်ခုသောအပြင်ဘက်တွင်ဒီ့အောက်မှာ .SO နှင့်ပင်အိုင်တီအောက်မှာကန်းထဲမှာပါလျှင်တောင်မှ တစ်စုံတစ်ခုသောအပြင်ဘက်တွင်။ ။ ဒီနည်းကိုအောက်မှာဖော်ပြထားသော CONE ၌တည်၏။ ဒီနည်းကိုပင်လျှင်အိုင်အောက်၌တည်ရှိ၏လျှင် တစ်စုံတစ်ခုသောအပြင်ဘက်တွင်။ ဒီနည်းကိုက CONE ၌တည်ရှိ၏ဆိုပါကပင်။ အပြင်ဘက်မှာတစ်နေရာရာ။ ကံဆိုးတယ်။ ဒီနည်းက CONE ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ တစ်နေရာရာအခြားအပြင်ဘက်မှာ။ ဒီနည်းကိုကဒီထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးဒီနည်းကိုက CONE .SO နှင့်ပင်လျှင်ဒါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး .SO AND ပင်အကယ်။ အိုင်အောက်တွင်ရှိလြှငျဤမျှလောက်မဟုတ်ပါဘူး .SO AND ရင်ထဲတွင်ရှိလျှင်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောဒါမပါအောက်မှာ .SO AND ရင်ထဲတွင်ရှိလျှင်တောင်မှကွဲပြားခြားနားသောဤမျှလောက်မပါအောက်မှာ .SO AND ရင်ထဲကပင်လျှင်ဤသည်အောက်မှာကွဲပြားခြားနားသောအများကြီးကွာခြားချက်မပါအောက်မှာ .SO AND ရင်ထဲကပင်လျှင်ဤသည်အောက်မှာကွဲပြားခြားနားသောဤမျှလောက်ကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ပါဘူးအောက်မှာ .SO AND တောင်မှအကယ်။ အိုင်အောက်တွင်ရှိလြှငျ, ဒီထဲကအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ပါဘူး .SO AND ရင်ထဲကပင်လျှင်, အကယ်။ အိုင်အောက်၌ကွဲပြားခြားနားသောအခြမ်းကိုချွတ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ SO Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ SO အိုင်တီ Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ ဒါအိုင်တီလိမ့်မည် Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ ဒါကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ SO အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ထို့ကြောင့်အိုင်တီသည်အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ရောက်လိမ့်မည် ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ် ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ထို့ကြောင့်အိုင်အိုင်ရှိအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် ထို့ကြောင့်အိုင်အိုင်ရှိအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် ထို့ကြောင့်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် ထို့ကြောင့်အိုင်အရှေ့အိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် ထို့ကြောင့်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ရေအောက်ရှာဖွေမှုသည် ပိုမို၍ ပိုမို၍ ရနိုင်သည် ထို့ကြောင့်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်၊ ရေတံခွန်သည်နောက်ထပ်နှင့် ပို၍ အလားအလာရှိနိုင် ထို့ကြောင့်ရေတံခွန်အတွက်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည်၊ အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့် ပိုမို၍ ကြည့်ရှုရန် ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ပို။ ပို။ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းရိုးတန်းသည်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ချနိုင်ပါသည် ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေမြေအောက်အထူးသဖြင့်ဖြတ်ကျော်နှင့်ပို။ ပို။ ကြည့်ရှုနိုင် ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းရိုးတန်းသည်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ပို၍ နှင့် ပို၍ ပို၍ ကြည့်နိုင်သည် ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေမြေအောက်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းတစ်လျှောက်တွင်အထူးသဖြင့် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေအထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) အထူးသဖြင့်အောက်တွင် ပိုမို၍ ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည် အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) ပုံမှန်အားဖြင့်ဆင်းသက်လာနိုင်သည့်နောက်ထပ်နှင့်ပိုသောအရာများ အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) တောင်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်နောက်ထပ်နှင့် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည် အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတစ်လျှောက်တွင်နောက်ထပ်နှင့်ပိုသော အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးစီးလာတဲ့ပိုပိုပြီးပိုများပါတယ် အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသလား မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားဖြတ်ကျော် မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ က မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ အများကြီး မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ အမြောက်အများ မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ မေးခွန်းများ တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ မေးခွန်းများ တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ ဆက်လက်မေးခွန်းများအများကြီး တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်တဲ့မေးခွန်းများအများကြီး တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများ တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများစွာရှိသည် တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်နိုင်တဲ့မေးခွန်းများ ယုံကြည်မှု။ သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်နိုင်တဲ့မေးခွန်းများ ယုံကြည်မှု။ အသေးစားအပြောင်းအလဲများကြီးကြီးမားမားလုပ်နိုင်တဲ့မေးခွန်းများ ယုံကြည်မှု။ သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများကကြီးမားသောကွဲပြားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည် ယုံကြည်မှု။ အသေးအဖွဲပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများကဒီမှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု။ အသေးအဖွဲပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများအမြောက်အများဤနေရာတွင်အကြီးအကျယ်ကွဲပြားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယုံကြည်မှု။ အသေးစားအပြောင်းအလဲများမှကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများစွာသည်ကြီးမားသောကွဲပြားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသေးစားအပြောင်းအလဲများအားလုံးဒီမှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် အသေးစားအပြောင်းအလဲများကို SPAGHETTI အားလုံးဒီမှာကြီးမားတဲ့မတူကွဲပြားမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် အသေးစားအပြောင်းအလဲများသည် SPAGHETTI မော်ဒယ်များအားလုံး၌ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသေးစားအပြောင်းအလဲများသည်ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့် SPAGHETTI မော်ဒယ်များအားလုံးဒီမှာပါ အသေးစားအပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤကွန်ပြူတာသည် SPAGHETTI ပုံစံများအားလုံး ဒီမှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများမှာကွန်ပျူတာများဖြစ်သော SPAGHETTI ပုံစံများဖြစ်သည် ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားချက်ဒီမှာမော်ဒယ်လ်များဖြစ်သော SPAGHETTI မော်ဒယ်များအားလုံး ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမှာကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များမှထုတ်လုပ်သော SPAGHETTI MUDELL များ ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမှာဒီဂျစ်တယ်တီထွင်ထားသော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ။ ဒီနည်းနှစ်ခုလုံးမှကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များဖြစ်သော SPAGHETTI MUDELL များအားလုံးသည်ကြီးမားသောကွဲပြားမှုများဒီမှာရှိသည်။ ဒီကွဲပြားမှုနှစ်ခုလုံးမှဒီဂျစ်တယ်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိဒီဂျစ်တယ်ကွဲပြားခြားနားသော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ။ ဒီနည်းကိုနှစ်ခုစလုံးမှစတီထွင်သော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ SPAGHETTI MODELS ဒီနည်းကိုဒီနေ့မွန်းတည့်မှပေးသည် ဒီနည်းကိုရောဒီနည်းကိုရောကွန်ပျူတာရဲ့ပုံစံတွေပါတဲ့စပဂတ်တီပုံစံတွေ။ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ပြီးနောက်ဒီစက်တွေကကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့ SPAGHETTI ပုံစံများ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနှင့်ဒီနေ့ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုမှကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များဖြစ်သော SPAGHETTI ပုံစံများနှင့် ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနှင့်ဒီမွန်းလွဲပိုင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များမှသော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ ဒီနည်းကိုနှစ် ဦး စလုံးမှညနေပိုင်းနှင့်ဤနေ့လည်နှင့်အဖွဲ့ဝင် ဒီနည်းကိုနှစ် ဦး စလုံးမှညနေပိုင်းနှင့်ဒီနည်းကိုပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင် ဒီနည်းကိုနှစ် ဦး စလုံးမှညနေပိုင်းနှင့်ဒီနည်းကိုပြီးနောက်နှင့်အဖွဲ့ဝင် ဒီနည်းနဲ့ဒီမနက်ခင်းနဲ့မွန်းတည့်ပြီးနောက်မှရုံးအရာရှိများ ဒီမနက်ခင်းနဲ့ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနဲ့ရုံးဖွင့်လှစ်မှုအဖွဲ့ဝင် ဒီမနက်ခင်းနဲ့ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနဲ့ရုံးဖွင့်လှစ်မယ့်သူရဲ့ပုံစံ။ ဤနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဖွဲ့ဝင် ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်၏အဖွဲ့ဝင် ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အကြောင်း ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အဖွဲ့ဝင်အကြောင်း ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်နှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဲဒီမှာ၌ရှိ၏။ ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်နှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဲဒီမှာ၌ရှိ၏။ SO ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်နှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဲဒီမှာ၌ရှိ၏။ SO အိုင်တီပါပဲ တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီပါပဲ တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ ဒါအိုင်တီ ON တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ ဒါအိုင်တီပေါ်မှာ တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက်တွင်ပါတယ် တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက် EDGE တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက် EDGE တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနည်းကိုခေါ်ဝေါ်သောအရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ။ အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ။ SO အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ။ ထပ်ထပ် ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ် ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ငါထပ်ထပ်, ငါ ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ်ငါထင်ပါတယ် ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ်ငါထင်ခဲ့တယ် ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ်ငါသူတို့ထင်ကြလိမ့်မည် ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ဒီတော့ထပ်, ငါသူတို့ထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ဒီတော့ထပ်ငါငါသူတို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့ထပ်ငါငါသူတို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့ထပ်ငါငါသူတို့ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒါကြောင့်ငါပြန်စဉ်းစား, သူတို့ပြန်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့ထပ်, ငါသူတို့ပြန်သွားရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်တယ် ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့နောက်တဖန်, ငါသည်သူတို့နောက်တဖန်အိုင်တီရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့နောက်တဖန်သူတို့ကိုပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တယ် ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့နောက်တဖန်ငါရှိသည်သောသူတို့ကိုပြန်စဉ်းစား, အိုင်တီပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ် , ငါသည်သူတို့ပြန်မယ်လို့အိုင်တီပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ် , ငါသည်သူတို့ထင်ကြလိမ့်မည်ဟုသောအရာကိုပြန်ပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ် သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်သူတို့ကိုခဲ့နောက်မှရွှေ့ , ငါသူတို့လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပျက်ကတည်းကနောက်တဖန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင် သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွစျခဲ့ပေမယ့် သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပါပြီ သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်, သူတို့ကိုပြန်သွား အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့ကဖွင့် အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့က OFF ဖွင့် အိုင်တီပြန်ရွှေ့ပါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့အဘို့ဖွင့် အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ IF အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ အိုင်တီ IF အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ လုပ်ရင် အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ အကယ်၍ IT လုပ်လျှင် အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ အကယ်၍ IT လုပ်လျှင် အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ နည်းနည်းလုပ်ရင် အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ နည်းနည်းလေးသေးဘူးဆိုရင် အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ အနည်းငယ်သာလုပ်နိုင်လျှင် အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ် ယခု FOR OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ် ယခု FOR OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်ကုန်းတွင်းပိုင်းလိုပဲ ယခု FOR OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင် INLAND ကဲ့သိုငါတို့လိုပိုသေးတယ် ယခု FOR OFF ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်နည်းနည်းလေးမှနည်းနည်းလေးလုပ်မိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောကုန်းတွင်းပိုင်းမြေများကဲ့သို့ဖြစ်သည် ယခု FOR OFF ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သေးငယ်သောအိတ်ငယ်တစ်ခုလုပ်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအခြေအနေကဲ့သို့ပင်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ပိုမိုသော ယခု FOR OFF ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သေးငယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွေးတောမှုများကဲ့သို့သောကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများ၌ပိုမိုများပြားသည်။ WE အနည်းငယ်သာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသေးငယ်တဲ့ INITE BIT ကျနော်တို့လက်ရှိစဉ်းစားနေကြသည် ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသည့်နည်းနည်းလေးသေးငယ်သောကုန်းတွင်းပိုင်း BIT ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသောနည်းနည်းလေးသေးငယ်သောကုန်းတွင်းပိုင်း BIT ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိစဉ်းစားနေသောနည်းနည်းလေးသေးသေးလေးကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ပိုမိုနည်းနည်းပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုခေတ်တွင်တွေးတောဆင်ခြင်မှုများကဲ့သို့သောသေးငယ်သောသေးငယ်သောကုန်းတွင်းပိုင်းအပိုင်းအစများပိုမိုနည်းပါးလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရိုးရိုးလေးစီးဆင်းနေပြီ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရထားစီးဆင်းမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရိုးရိုးလေးစီးဆင်းနေပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရိုးရိုးလေးစီးသွားသည်၊ အချို့ကိစ္စများရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲ၊ ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုတွေရှိတယ်၊ တချို့မေးခွန်းတချို့ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရိုးရိုးလေးပြောင်းလဲသွားပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများနည်းနည်းမှနည်းနည်းပါးပါးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများနှင့်လိမ်လည်မှုများရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများ၊ လိမ်ညာသည့်နေရာအချို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရိုးရိုးရိုးရိုးလေးစီးနင်းမှုရှိခဲ့ပြီ၊ အချို့ကိစ္စများရှိခဲ့ဖူးသည်၊ အချို့သောအနိမ့်အလတ်အစက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများရှိကြသည်၊ အချို့သောအနိမ့်အလတ်အစက်များသည်ရေလွှမ်းမိုးမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများရှိကြသည်၊ အချို့သောအနိမ့်အလတ်အစက်များသည်ရေကြီးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလိမ်ညာသည့်နေရာများသည်ရေလွှမ်းမိုးခံရလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်မေးခွန်းအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သာရေလွှမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ THE ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ လေ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ လေတိုက်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ လေလိမ့်မယ် လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေလိမ့်မယ် လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ် လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြMနာဖြစ်လိမ့်မည်, \_ t လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်စားမှုပြMနာဖြစ်နိုင်သည်, ဖြစ်နိုင်သည် လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်စားမှုပြMနာဖြစ်လိမ့်မည်, ပင်ဖြစ်လိမ့်မည် အနည်းငယ်။ လေတိုက်စားမှုပြMနာဖြစ်လိမ့်မည်, ပင်ဖြစ်လိမ့်မည် အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြPROနာဖြစ်လိမ့်မည်, ပင်နယ်နိမိတ်ဖြစ်နိုင်သည် အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြPROနာဖြစ်လိမ့်မည်, တောင်မှနယ်နိမိတ်ထိတွေ့နိုင် အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြMနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီး၊ အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြPROနာဖြစ်နိုင်သော်လည်းအနည်းငယ်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေနိုင်သော်လည်း အနည်းငယ်။ လေတိုသည်ပြPROနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအနည်းငယ်ပိုမြင့်သောနယ်နိမိတ်နှင့်ထိစပ်နေနိုင်သော်လည်း အလယ်အလတ်ပြPROနာ, တောင်မှအနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေစေနိုင်သည် အလယ်အလတ်ပြPROနာ, ဒီထက်နည်းအနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ဖြစ်နိုင်သည် အလယ်အလတ်ပြနာ, ဒီထက်အနည်းငယ်မြင့်သောအပေါ်နယ်နိမိတ်ရင်တောင်ဖြစ်နိုင် အလယ်အလတ်ပြPROနာ, ဒီနည်းကိုဒီထက်နည်းနည်းမြင့်မားအပေါ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်စေခြင်းငှါ မျက်မှောက်ခေတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုထက်နိမ့်သောအမြင့်ဆုံးနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေလျှင်၊ မျက်မှောက်ခေတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုထက်နည်းသောအနိမ့်ပိုင်းနှင့်ထိစပ်နေသည့်တိုင်ပြောင်းလဲမှုရှိသောပြMနာ, ဖြစ်နိုင်သည် အနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောဒီရေလှိုင်းကြီးများသည် ဒီထက်ပိုမြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လိမ့်မည် ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဒီရေဒီယိုရေဒီယိုကမပြောင်းလဲဘူး ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးမှုဟာများများစားစားရှိနိုင်ပြီး အနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောဒီရေလွှမ်းမိုးမှုသည်အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်လိမ့်မည် သောဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်တိုနာဒိုဖြစ်လိမ့်မယ် သောဒီရေဒီရေလွှမ်းမိုးမှုသည်အလယ်အလတ်နှင့်ရေပန်းစားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည် သောဒီရေဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်မီပြီးတိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်လိမ့်မည်။ သောဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်အလတ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော TORNADO ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်လိမ့်မည်။ သောဒီရေဒီရေလွှမ်းမိုးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင်ရှိပြီး၊ သောဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင်ရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေ WE ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျနော်တို့ညာဘက်လက်၌ရှိလိမ့်မယ် အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျနော်တို့လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ျာဘက်၌ရှိလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ျာဘက်၌ရှိလိမ့်မည် အလယ်အလတ်နှင့်လေဆင်နှာမောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်ုပ်တို့သည်မုန်တိုင်း၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ် အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်ုပ်တို့သည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ် ကျနော်တို့ Storm မုန်တိုင်း၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိနိုင်ပြီးတိုတိုတို့ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်သောလမ်း၌ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သဖြင့်တိုတိုနှင့်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်သောလမ်း၌ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့တိုတိုနှင့်တစ်နည်းနည်းဖြစ်လိမ့်မယ် STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုနှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုနှင့်အထီးကျန်ဖြစ်လိမ့်မည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုနှင့်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေမယ့်ဖြစ်လိမ့်မယ် STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သို့သော်ငါတို့မူကား STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လိုသည် သူတို့ကအတိုချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်တစ်နည်းနည်းနဲ့အထီးကျန်ပေမယ့်ငါတို့လို သူတို့သည်တိုတိုနှင့်တစ်စုံတစ်ရာအဖြစ်သီးခြားနေရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့လိမ့်မည် သူတို့ကအတိုချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်တစ်နည်းနည်းနဲ့သီးခြားဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကို definitiely ရှိသည် သူတို့ကအတိုချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထီးကျန်ဖြစ်ရသော်လည်းအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အဓိပ္ပာယ်မဲ့လိမ့်မည်။ သူတို့ဟာတိုတောင်းပြီးသီးခြားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပေမယ့်အချို့သောဖောင်ဒေးရှင်းတွေရှိခဲ့မယ်။ သီးခြားဖြစ်ပေမယ့်ကျနော်တို့အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ် သီးခြားဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့ကအပြင်းအထန်တာ ၀ န်ထမ်းအချို့ကိုဖြတ်ကျော်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။ သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်ကျော် ၀ င်ရောက်စီးနင်းနိုင်သည့်အချို့သောကုန်တင်သင်္ဘောများရှိသည်။ သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ဒေသတွင်းဖြတ်ကျော်အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်။ သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ဒေသတွင်းဖြတ်ကျော်အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်။ SO သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ဒေသတွင်းဖြတ်ကျော်အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်။ ငါတို့ပါပဲ တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ငါတို့ပါပဲ တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒီတော့ငါတို့သွား တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒီတော့ငါတို့သွားပါ တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒီတော့ငါတို့ပြောပါမယ် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ MODERATE ပြောပါမယ် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ MODERATE ပြောပါမယ် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသို့ပြောပါမယ် တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသို့ပြောပါမယ် တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောရန်သွားတော့မည် တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောရန်သွားတော့မည် တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ငါတို့အဘို့အမြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့ MODERATE ပြောပါမယ် တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲရန်ပြောပါတော့မည်။ တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲရန်ပြောပါတော့မည်။ ထပ် ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ် ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, သော ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, သော AS ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, သောအိုင်တီ ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, အိုင်တီလွှဲပြောင်းကဲ့သို့ ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, အိုင်တီဖြတ်သန်းသွားသည်တဆင့် ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS က သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS က သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှည့်လည် AS အလွန်သေးငယ်သောမှတဆင့် သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့်ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ပေမယ့် သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS ရဲ့သေးငယ်တဲ့ပေမယ့်ကုန်းတွင်းပိုင်း သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS ရဲ့သေးငယ်တဲ့မှတဆင့်ပေမယ် INLAND IF သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့်ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့မှတဆင့်ပေမယ့် INLAND အိုင်တီ သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီ AS လှိမ့်ချမှတဆင့်သေးငယ်တဲ့ပေမယ့် INLAND အကယ်။ ပိုနီးကပ်လာလျှင် , အိုင်တီအိုင်တီလွှဲပြောင်း AS နည်းနည်းပေမယ့်အိုင်တီနီးကပ်လာလျှင် INLAND , အိုင်တီအိုင်တီလွှဲပြောင်း AS နည်းနည်းပေမယ့်ကပိုနီးကပ်လာလျှင် INLAND , အိုင်တီအိုင်တီလွှဲပြောင်း AS နည်းနည်းပေမယ့်အိုင်တီနီးကပ်လာလျှင် INLAND အိုင်တီအိုင်တီလှည့်လည် AS အလွန်သေးငယ်သောမှတဆင့်အိုင်တီကမ်းရိုးတန်းနှင့်နီးကပ်လာလျှင် INLAND ။ အိုင်တီအိုင်တီလှည့်လည် AS အလွန်သေးငယ်သောမှတဆင့်အိုင်တီကမ်းရိုးတန်းနှင့်နီးကပ်လာလျှင် INLAND ။ ဖြစ်လိမ့်မယ် အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ ဖြစ်လိမ့်မယ် အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ ပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ် အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါမယ် အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါစကားပြောမယ် အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါထပ်ပြောမယ် ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါထပ်ပြောမယ် ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းငါထပ်မံပြောမယ် ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ညွှန်းများအကြောင်းထပ်မံပြော ဦး မည် အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ညွှန်းများအကြောင်းထပ်မံပြော ဦး မည် အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ညွှန်းများအကြောင်းထပ်မံပြောမည် အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါလာသောအခါငါကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ AND အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ AND AS အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ AND ငါ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ AND ငါ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ AND ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ယူ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ AND ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ယူ
အပူပိုင်းဒေသ Update: Isaias ဟာဟာရီကိန်းအမျိုးအစား ၁ ဖြစ်နေဆဲ
<text sub="clublinks" start="0.6" dur="0.067"> မိနစ်များ။ </text>
<text sub="clublinks" start="0.667" dur="0.1"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့ </text>
<text sub="clublinks" start="0.767" dur="0.133"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့ညာ </text>
<text sub="clublinks" start="0.9" dur="0.101"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဖြောင့် </text>
<text sub="clublinks" start="1.001" dur="0.133"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတစ် ဦး က </text>
<text sub="clublinks" start="1.134" dur="0.3"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအနည်းငယ် </text>
<text sub="clublinks" start="1.434" dur="0.067"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအနည်းငယ်သာအိတ်ကပ် </text>
<text sub="clublinks" start="1.501" dur="0.1"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာ၏အနည်းငယ်အိတ်ဆောင် </text>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.067"> မိနစ်များ။ သို့သော်အခုအချိန်မှာအနည်းငယ်သောလေးလံသောအိတ်ဆောင် </text>
<text sub="clublinks" start="1.668" dur="0.067"> မိနစ်များ။ သို့သော်အခုအချိန်မှာအနည်းငယ်မိုးအိတ်ကပ်အနည်းငယ် </text>
<text sub="clublinks" start="1.735" dur="0.066"> မိနစ်များ။ သို့သော်အခုအချိန်မှာမိုးအနည်းငယ်ရွာသောအိတ်ကပ်အနည်းငယ် </text>
<text sub="clublinks" start="1.801" dur="0.267"> မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၏အိတ်ကပ်အနည်းငယ် </text>
<text sub="clublinks" start="2.068" dur="0.034"> မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၏အိတ်ကပ်အနည်းငယ် </text>
<text sub="clublinks" start="2.102" dur="0.1"> မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၏အိတ်ကပ်အနည်းငယ် </text>
<text sub="clublinks" start="2.202" dur="1.334"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းအနည်းငယ်အိတ်ကပ်ထဲမှာသိပ်မရှိပါဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="3.536" dur="0.134"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာမိုးနည်းရွာတဲ့မိုးနည်းနည်းလေးအိတ်ကပ်တွေကမက်ထရိုမှာသိပ်မများပါဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.133"> မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ငယ်အနည်းငယ်သည်မက်ထရိုမဟုတ်သော်လည်းသို့သော် </text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.134"> မိနစ်များ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ငယ်အနည်းငယ်သည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများလှသော်လည်း ထပ်မံ၍ </text>
<text sub="clublinks" start="3.937" dur="0.067"> မိနစ်များ။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာမိုးနည်းတဲ့မိုးနည်းနည်းလေးအိတ်ကပ်အနည်းငယ်ကမက်ထရိုမက်ထရိုမှာသိပ်မများလှပေမယ့်ထပ်မံ </text>
<text sub="clublinks" start="4.004" dur="0.233"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းသို့သော်ဆန့်ကျင်တစ်ခုဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="4.237" dur="0.067"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်သာ </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.067"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်သောဆန့်ကျင်မှု </text>
<text sub="clublinks" start="4.371" dur="0.1"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်နည်းနည်း ထပ်မံ၍ </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်နည်းနည်း ထပ်မံ၍ </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.133"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်သိပ်မများသော်လည်းအနည်းငယ်နည်းနည်း ထပ်မံ၍ </text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.067"> မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောအိတ်ကပ်များသည်မက်ထရိုတွင်ဤမျှလောက်မများပါ၊ သို့သော်အနည်းငယ်သာ ထပ်မံ၍ ပို၍ ဆိုးသည် </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.2"> မက်ထရိုထဲမှာအများကြီးပေမယ့်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ် SO သို့ဆင်း </text>
<text sub="clublinks" start="4.971" dur="0.1"> မက်ထရိုမှာအများကြီးပေမယ့်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ်ဒီနည်းကိုဖွင့်ကြကုန်အံ့ </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.067"> မက်ထရိုတွင်အများကြီးရှိပေမယ့်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ်ဒီတော့ဒီနည်းကိုရဲ့အာရုံစိုက်ပါစေ </text>
<text sub="clublinks" start="5.138" dur="0.067"> မက်ထရိုတွင်များများစားစားအနည်းငယ်သာဆန့်ကျင်သည်အနည်းငယ်သာထပ်မံလေ့လာကြည့်ရအောင်။ </text>
<text sub="clublinks" start="5.205" dur="0.1"> မက်ထရိုတွင်များများစားစားအနည်းငယ်သာဆန့်ကျင်သည်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ထပ်မံလေ့လာကြည့်ပါ ဦး ON ၏အာရုံစိုက်မှု </text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.067"> မက်ထရိုတွင်များများစားစားဆန့်ကျင်အနည်းငယ် BIT နောက်ထပ်ဒီတော့ဒီနည်းကို၏အာရုံစိုက်ပါစေ </text>
<text sub="clublinks" start="5.372" dur="2.469"> အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့ </text>
<text sub="clublinks" start="7.841" dur="0.1"> အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့။ </text>
<text sub="clublinks" start="7.941" dur="0.267"> အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့။ ထပ် </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.066"> အနည်းငယ်ပိုဒီနည်းကို SO ဒီနည်းကိုဟာရီကိန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြကုန်အံ့။ ထပ်, ဒီနည်းကို </text>
<text sub="clublinks" start="8.274" dur="0.267"> ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီနည်းကို </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီဆက်ပြောသည် </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.101"> ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီအဆက်တည်ငြိမ်သောလေ </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.166"> ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီဆက်ပြောဒီလေတိုက်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="8.908" dur="0.067"> ဟာရီကိန်းတွင်အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.2"> Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.067"> Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ် 'S ဖွင့်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="9.242" dur="0.1"> Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်ရဲ့ထားပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.034"> Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်သောချထားကြလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> Hurricane ။ ထပ်မံ, ဒီတည်ငြိမ်သောလေတိုက်နှုန်းအမှန်တကယ်ဖွင့်ချထားပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.166"> Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်အမှန်တကယ်အဲဒီမှာဖွင့်ထားကြလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="9.642" dur="0.067"> Hurricane ။ ထပ်, ဒီအဆိုးမြင်လေတိုက်နှုန်းအမှန်တကယ်အဲဒီမှာဖွင့်ထားကြလိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ </text>
<text sub="clublinks" start="9.709" dur="2.403"> ရေရှည်တည်တံ့သောလေများအမှန်တကယ်ရှိစေခြင်းငှါဖွင့်ထားပါစေ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.133"> ရေရှည်တည်တံ့သောလေများအမှန်တကယ်အားဖြင့်အဲဒီမှာဖွင့်ထားကြကုန်အံ့ </text>
<text sub="clublinks" start="12.245" dur="0.134"> တည်ငြိမ်သောလေများသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့် ၁၁း၀၀ တွင်ဖွင့်ချနိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.133"> တည်ငြိမ်သောလေတိုက်ခတ်မှုသည် ၁၁း၀၀ အကြံပေးသောကြောင့်၎င်းအားဖွင့်ချပေးလိမ့်မည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.1"> ရေရှည်တည်တံ့သောလေတိုက်ခတ်မှုသည် ၁၁း၀၀ မှအကြံဥာဏ်ရှိသဖြင့်၎င်းအားထည့်သွင်းကြပါစို့။ </text>
<text sub="clublinks" start="12.612" dur="0.067"> ရေရှည်တည်တံ့သောလေတိုက်ခတ်မှုသည် ၁၁း၀၀ တွင်အကြံဥာဏ်ရှိသဖြင့်၎င်းအားထည့်သွင်းပါစေ။ </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.267"> အဲဒီမှာဖွင့်ကြကုန်အံ့ 11:00 အကြံပေးချက်ရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.1"> အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကြောင့် 11:00 အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည်အကြံဥာဏ်ရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.1"> အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 11:00 အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပိတ်သောလေတိုက် </text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကွောငျ့ 11:00 အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အကြံဥာဏ်မှန်ကန်သောလေတိုက် </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကွောငျ့ 11:00 အကြံပေးချက်ယခုအချိန်တွင်တည်ငြိမ်သောလေတိုက်လေပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.101"> အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သောကွောငျ့ 11:00 အကြံပေးချက်ယခုအချိန်တွင်တည်ငြိမ်သောလေတိုက်လေပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="13.38" dur="0.066"> အဲဒီမှာဖွင့်ကြပါစို့သော 11:00 အကြံပေးချက်ယခုအချိန်တွင် 80 မှာအသက်မသေနိုင်သောလေပြင်းများတည်ရှိပြီးသောလေတိုက်ရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="2.069"> THE 11:00 အကြံပေးချက်ကိုယခုအချိန်တွင် 80 မှာတည်ငြိမ်သောလေတိုက်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.133"> THE 11:00 အကြံပေးချက်ယခုမိုင် 80 မှာအခုအချိန်မှာတိုက်တည်ငြိမ်လေပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="15.648" dur="0.101"> ၁၁း၀၀ တွင်အကြံပေးချက်သည်မိုင် ၈၀ နှုန်းဖြင့်ယခုအချိန်ထိတိုက်ခတ်နေသောလေများရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="15.749" dur="0.133"> THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်တစ်နာရီလျှင်မိုင် ၈၀ တွင်မှန်ကန်သောတိုက်ပွဲများရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.134"> ၁၁း၀၀ တွင်အကြံပေးချက်သည်မိုင် ၈၀ ခန့်တွင်ယခုအချိန်ထိတည်တံ့သောလေများရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.133"> THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်ယခုအချိန်တွင်မိုင် ၈၀ ခန့်တွင်အရှိန်အဟုန်ပြင်းသောလေတိုက်ခတ်နေပြီဖြစ်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.133"> THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်ယခုအချိန်တွင်မိုင် ၈၀ နှင့်အဝေးပြေးလမ်းတစ်လျှောက်တွင်တိုက်ဖျက်သောလေများရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> THE 11:00 အကြံပေးချက်သည်ယခုအချိန်တွင်မိုင် ၈၀ ခန့်တွင်တည်ရှိပြီးသောတိုက်လေယာဉ်များနှင့်ရုတ်တရက်ပျက်စီးသွားသောအခြေအနေများဖြစ်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.2"> အခုအချိန်မှာအဆင်သင့် Window တစ်နာရီမိုင် ၈၀ နဲ့ AND ည့်သည်တွေအတွက် </text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> အခုအချိန်ထိဆက်တိုက်တိုက်နေသည့်မိုင် ၈၀ တွင်တစ်နာရီလျှင်မိုင် ၁၀၀ အထိရှိပြီး၊ </text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.067"> အခုအချိန်ထိမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုမိုင် ၈၀ ခန့်ရှိပြီးတစ်နာရီလျှင် ၁၀၀ အထိမိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးမှာရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.133"> ယခုအချိန်တွင်ရေမိုင် ၈၀ တွင်တစ်နာရီလျှင်မိုင် ၈၀ အကွာအဝေးရှိပြီးယခုအခါ ၁၀၀ သို့ရောက်သော THE ည့်သည်များ။ </text>
<text sub="clublinks" start="16.816" dur="2.836"> အခုအချိန်အထိရေမိုင် ၈၀ မှာအရှိန်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်နေပြီးတစ်နာရီလျှင်မိုင် ၈၀ နှုန်းနှင့်လူ ၁၀၀ အထိအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="19.652" dur="0.134"> အခုအချိန်ထိရေမိုင် ၈၀ ခန့်ရှိပြီးတစ်နာရီကို ၁၀၀ မိုင်နှုန်းသာရှိပြီးလက်ရှိအခြေအနေ ၁၀၀ ။ </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.267"> အခုအချိန်ထိဆက်တိုက်တိုက်နေသည့်မိုင် ၈၀ တွင်တစ်နာရီလျှင် ၁၀၀ သို့မိုင်ပေါင်း ၁၀၀ အထိအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရောက်ရှိနေသည်။ မှန်သည်။ ၉၀ ။ </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> အခုအချိန်အထိရေရှည်မိုင် ၈၀ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပြီးတစ်နာရီကို ၁၀၀ အထိအနိမ့်အမြင့်များမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> တစ်နာရီမိုင်နှုန်း ၁၀၀ လောက်ရှိမယ့်သူတွေအားလုံးကိုသွားမယ်။ အရင်အစောပိုင်း ၉၀ နှစ် </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.1"> တစ်နာရီမိုင်နှုန်း ၁၀၀ လောက်ရှိမယ့်လူတွေအားလုံးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အရင် ၁၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀ နှစ်ပြည့် </text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.033"> တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့ THE ည့်ခန်းတွေ ၁၀၀ အထိ။ မနက်စောစော ၉၀ ပြည့်မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.134"> တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့ THE ည့်ခန်းတွေ ၁၀၀ အထိ။ တကယ့်အစောပိုင်း OR ၉၀ ။ </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.167"> တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့လူ ၁၀၀ ကိုဖြတ်သွားမယ့်သူတွေရှိတယ်။ အရင် ၁၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀ ရမယ်။ ဒါကနည်းနည်းလေးကြာပြီ။ </text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> တစ်နာရီမိုင်တစ်နာရီနဲ့လူ ၁၀၀ ကိုဖြတ်သွားမယ့်သူတွေရှိတယ်။ အရင် ၁၀၀ ဒါမှမဟုတ် ၉၀ ရမယ်။ ဒါကနည်းနည်းလေးပိုပြီးအားကောင်းတယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="3.103"> 100. THE GUST အစောပိုင်း OR 90. ဒီနည်းကိုပြန်နည်းနည်းအားကောင်းတဲ့ </text>
<text sub="clublinks" start="23.923" dur="0.134"> ၁၀၀. တာဝန်ကျေပွန်ပါသို့မဟုတ် ၉၀ ။ </text>
<text sub="clublinks" start="24.057" dur="0.133"> ၁၀၀။ တာ ၀ န်ရှိသူဟောင်း ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တောင်မှအားနည်းတဲ့အခြေအနေတောင်မှ </text>
<text sub="clublinks" start="24.19" dur="0.134"> ၁၀၀။ တာ ၀ န်ရှိသူဟောင်း ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုပြန်ကြည့်ရင်နည်းနည်းလေးပိုပြီးအားကောင်းပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.133"> ၁၀၀။ တာရှည်စော ၉၀ ။ ဒါကနည်းနည်းလေးပိုခက်တယ်တောင်မှမသိဘူးတောင်မှဒီတစ်ခါတော့ </text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="0.1"> 100. ပို့တဲ့အစောပိုင်း (သို့) ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုမပြနိုင်ရင်တောင်မှအင်အားကြီးမားသောအလား </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.067"> ၁၀၀. တာဝန်ကျတဲ့အစောပိုင်း (သို့) ၉၀ ။ ဒီနည်းကိုပြန်မပြောဘဲနေရင်တောင်မှအင်မတန်အားကောင်းတဲ့အရာပါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="24.624" dur="0.2"> ထပ်ခါတလဲလဲမပြသသော်လည်းအနည်းငယ်အားကြီးသော </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> ထပ်မံအင်အားကြီးမားသောအနေဖြင့်တောင်မှ၎င်းသည်လုံးဝမပြနိုင်သော်လည်း </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> ထပ်မံအင်အားကြီးမားသောအရာတောင်မှ၎င်းသည်အတော်အတန်သော်လည်းမပြသသော်လည်း </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.1"> ထပ်မံအင်အားကြီးမားသောအရာတောင်မှ၎င်းသည်အတော်လေးသေးမပြသသော်လည်း </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.167"> ထပ်ခါတလဲလဲအနည်းငယ်သာခိုင်မာတောင့်တင်းသော်လည်း၊ </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.066"> ထပ်ခါတလဲလဲအနည်းငယ်သောခိုင်မာတောင့်တင်းမှုရှိသော်လည်း၎င်းကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်း </text>
<text sub="clublinks" start="25.291" dur="1.902"> တောင်မှဒီအစဉ်အဆက်အတော်လေးတက်မပြသ SUSTAINED ၌တည်၏ </text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="0.134"> ဒီသတင်းတောင်မှအဆက်မပြတ်သောအခြေအနေများတွင်တောင်မှအတော်အတန်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="27.327" dur="0.233"> ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ </text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.134"> ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါ </text>
<text sub="clublinks" start="27.694" dur="0.133"> ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါထင်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.134"> ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါသူတို့ထင်ခဲ့တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုတောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လေထဲမှာတောင်လုံးဝမပြနိုင်ဘူး။ ငါထင်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.2"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါထင်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.066"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.067"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.1"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ CONE ကိုရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="3.003"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့က Cone တစ် ဦး ကိုရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="31.464" dur="0.134"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ CONE အနည်းငယ်ရွှေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="31.598" dur="0.133"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့ CONE အနည်းငယ် BIT ကိုရွှေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="31.731" dur="0.067"> အခုအချိန်မှာဆက်တည်ရှိနေသောလေတိုက်နှုန်း၌ရှိသေးတယ်။ ငါသူတို့က CONE အနည်းငယ် BIT ရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.167"> NOW က Wind ။ ငါသူတို့က CONE အနည်းငယ် BIT ရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="0.1"> NOW က Wind ။ ငါသူတို့ CONE အနည်းငယ် BIT ကိုရွှေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="32.065" dur="0.1"> NOW က Wind ။ သူတို့သည်အ ၀ ိဇ္ဇာအနိမ့်အမြင့်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="32.165" dur="0.067"> NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Conse အနည်းငယ်ကိုက်တဲ့အနောက်ဘက်မှရွေ့လျားလိမ့်မယ်, စဉ်းစားပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="0.133"> NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Cone အနည်းငယ်ကိုက်တဲ့အနောက်ဘက်မှကိုက်, ရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="32.365" dur="0.134"> NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Cone အနည်းငယ်ကိုက်သောအနောက်နိုင်ငံများသို့သွား, လမ်းကြောင်းရွှေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.066"> NOW က Wind ။ ငါသူတို့က Cone အနည်းငယ်ကိုက်နဲ့အနောက်ဘက်ကိုက်, လမ်းကြောင်းတစ် ဦး MOVE လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="32.565" dur="0.234"> Cone အနည်းငယ်ကို BEST သို့ရွှေ့ပါ။ A ကိုရွှေ့ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="32.799" dur="0.067"> ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ အနည်းငယ်သောလမ်းကြောင်းကိုရွှေ့ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="32.866" dur="0.033"> ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="32.899" dur="0.134"> ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုရွှေ့ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> အကန့်တစ်ခုမှအနည်းငယ်သောအရာ ၀ တ္ထုကိုရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုအနောက်သို့ရွှေ့ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> ကန့်ကိုအနည်းငယ်သောနည်းနည်းဖြင့်အနောက်ဘက်သို့ရွှေ့ပါ၊ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုအနောက်သို့ရွှေ့ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.233"> အနောက်ဘက်, လမ်းကြောင်းနည်းနည်းအနီရောင်သို့ပြောင်းပါ </text>
<text sub="clublinks" start="33.566" dur="2.336"> အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.134"> အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့ </text>
<text sub="clublinks" start="36.036" dur="0.1"> အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့မရှိခဲ့ဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.133"> အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="36.269" dur="0.067"> အနောက်ဘက်, 11:00 AT အနောက်နိုင်ငံများနည်းနည်း BIT ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.133"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ </text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.1"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါ </text>
<text sub="clublinks" start="36.569" dur="0.1"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် .... လုပ်သင့်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="36.669" dur="0.101"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် .... လုပ်သင့်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="36.77" dur="0.133"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါရွှေ့ပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="36.903" dur="0.134"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီရွှေ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="37.037" dur="0.133"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကိုရွှေ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.067"> 11:00 AT အနောက်ဘက်နည်းနည်း။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်သောရွှေ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="37.237" dur="0.167"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်သောရွှေ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.066"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကအလွန်သေးငယ်သော BIT သို့ရွှေ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်တဲ့ BIT မရွှေ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="1.602"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကအလွန်သေးငယ်သော BIT မဟုတ်ပါ MOVE ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.133"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်တဲ့ကိုက်မဟုတ်ဘဲသေးငယ်တဲ့အိုင်တီရွှေ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.134"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကသေးငယ်တဲ့ BIT ကို AT တန်ချိန်မဟုတ်ပါရွှေ့ခဲ့ကြလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီအနည်းငယ်ရွှေ့ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုမှာတစ်တန်မဟုတ် </text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> 11:00 ။ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.167"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ </text>
<text sub="clublinks" start="39.806" dur="0.067"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ဒါပေမဲ့ </text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.066"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ဒါပေမဲ့ IN </text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.134"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ ဒါပေမဲ့မဆို </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.133"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို </text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.1"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အိုင်တီပါပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.134"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အိုင်တီတစ် ဦး </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.067"> ငါအိုင်တီတစ် ဦး ကဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ် ဦး သည်အလွန်သေးငယ်သော BIT တစ် ဦး က TON မဟုတ် BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကြီးမားသော </text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.233"> ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကြီးမားသော </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.1"> ဒီနည်းကို POINT ကို AT တွန်းမ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="40.84" dur="2.503"> ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း </text>
<text sub="clublinks" start="43.343" dur="0.133"> ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွားနေပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.134"> ဒီနည်းကို POINT ကို AT တွန်းမ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှု </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> ဒီနည်းကို POINT ကို AT တစ်တန်မ BIT ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာသွားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.201"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာသွားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.066"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှု EV ည့်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="43.943" dur="0.101"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာ၌မသွားဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="44.044" dur="0.1"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုOရိယာသွားမယ့်အခွင့်အရေး </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.1"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုOရာမယ့်တောင်မှလက်ျာဘက် </text>
<text sub="clublinks" start="44.244" dur="0.133"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုEVရာမယ့်တောင်မှလက်ျာဘက် </text>
<text sub="clublinks" start="44.377" dur="0.067"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတောင်မှဗဟိုအောက်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.2"> စနစ်။ အိုင်တီအပေါ်သက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတောင်မှဗဟိုအောက်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ </text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="1.902"> စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ SO </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.133"> စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ စဉ်းစားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.167"> စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ SO စဉ်းစားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.067"> စနစ်။ အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်မှုEVရိယာလာမယ့်စင်တာ LINE အောက်မှာ။ စဉ်းစားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="46.98" dur="0.2"> ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ စဉ်းစားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="47.18" dur="0.067"> ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီတော့စဉ်းစားနှင့်အောက်မေ့သတိရပါ </text>
<text sub="clublinks" start="47.247" dur="0.1"> ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားနှင့်အောက်မေ့သတိရပါ </text>
<text sub="clublinks" start="47.347" dur="0.1"> ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီနည်းကိုသာစဉ်းစားနဲ့သတိရပါ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.067"> ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်အောက်မေ့သတိရပါ </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.133"> ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီတော့ဒီနည်းကို 70 နှင့်ပတ်သက်။ တစ်ခုသာသတိရပါ </text>
<text sub="clublinks" start="47.647" dur="0.067"> ပင်ဗဟိုလိုင်းအောက်မှာတောင်မှ။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနဲ့သတိရပါ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကို </text>
<text sub="clublinks" start="47.714" dur="0.167"> လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနဲ့သတိရပါ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကို </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.066"> လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်သတိရပါ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ </text>
<text sub="clublinks" start="47.947" dur="0.067"> လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်အိုင်တီတစ်ခုလုံးရဲ့ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ </text>
<text sub="clublinks" start="48.014" dur="0.067"> လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်အချိန်ရဲ့ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကိုပါပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="2.903"> လိုင်း။ ဒါကြောင့်စဉ်းစားပါနှင့်အိုင်တီ THE TIME အိုင်တီ TIME ၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.133"> လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနှင့်သတိပြုပါအောက်ပါအချိန်ရဲ့ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.1"> လိုင်း။ ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါနှင့်သတိရပါအောက်ပါကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်သာ </text>
<text sub="clublinks" start="51.217" dur="0.134"> လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနှင့်အောက်မေ့သတိရပါအိုင်တီအချိန်၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာအဆုံးသတ်နိူင် </text>
<text sub="clublinks" start="51.351" dur="0.067"> လိုင်း။ ဒီတော့စဉ်းစားပါနှင့်သတိရအောက်မေ့သတိရပါအောက်ပါကာလ၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာဒီနည်းကိုဖွင့်အဆုံးသတ် </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.166"> ဒါကတစ် ဦး တည်းသောအကြောင်း 70 ခု၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အိုင်တီ၌တည်သောကာလ၏ </text>
<text sub="clublinks" start="51.584" dur="0.1"> ဒါကတစ်ခုတည်းသောအကြောင်း 70% ရဲ့အချိန်ရဲ့အိုင်တီတွင်ပင်အဆုံးသတ် </text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.067"> ဒါကတစ်ခုလုံးရဲ့ ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်ကအိုင်တီအဆုံးလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="0.134"> ဒါကတစ်ခုတည်းသောအကြောင်း ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒီအထဲကအ ၀ ိဇ္ဇာတောင်ထိပ်ဆုံးရောက်နေပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="51.885" dur="0.1"> ဒါကတစ်နာရီခန့်ရဲ့ ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီအတိုင်းပဲအဆုံးသတ်သွားပြီ။ </text>
<text sub="clublinks" start="51.985" dur="0.133"> ဒါကတစ်နာရီခန့်ရဲ့ ၇၀ လောက်ပဲရှိတယ်၊ ဒီနေ့ဟာ ၄ ရက်မြောက်နေ့မှာအ ၀ ိဇ္ဇာတွင်အဆုံးသတ် </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.134"> ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၏တစ်ခုတည်းသောနေ့ဖြစ်သော်လည်း ၄ င်း၏နေ့သည် ၄ ​​င်း၏အချိန်၌ ၄း၃ </text>
<text sub="clublinks" start="52.252" dur="2.869"> ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလျှင်သောနေ့သည်အ ၀ ိဇ္ဇာအတွင်း၌အဆုံးသတ်သွားသည် ၄ ​​၃ ၄ </text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.134"> ၎င်းသည်အချိန်ကာလ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၏တစ်ခုတည်းသောနေ့ဖြစ်သော်လည်း ၄း၄ တွင် ၄ င်းသည်အ ၀ ိဇ္ဇာတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.2"> ၎င်းသည်အချိန်၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာလျှင်သော့သည် ၄ ​​င်း၏ ၄ ၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ပြိုလဲသွားသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="55.455" dur="0.167"> အချိန်ကပင် UP IN THE Cone ကို AT နေ့'S434နှင့်5အဆုံးသတ်ထားသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="55.622" dur="0.066"> ဒီနေ့၏အဆုံး၌ ၄ င်းတို့၏နေ့များသည် ၄ ​​၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်တည်ရှိသည်။ SO </text>
<text sub="clublinks" start="55.688" dur="0.101"> ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့၌ CONE ၌အဆုံး၌တည်သောနေ့၏334နှင့်5။ ဒီတော့ဘာ </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.1"> ဒီနေ့ရဲ့အဆုံး၌ ၄ င်းတို့၏နေ့များသည် ၄ ​​၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ရောက်နေပြီ။ ဘာလဲ </text>
<text sub="clublinks" start="55.889" dur="0.1"> ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့၌ CONE ၌အဆုံး၌တည်သောကာလ၏334နှင့်5။ ဒီတော့ဘာပြောလိုက်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="55.989" dur="0.133"> ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့များသည်ကန္တာရ၌အဆုံး၌တည်သောနေ့၏334နှင့်5။ ဒီတော့သင့်ကိုပြောပြသည် </text>
<text sub="clublinks" start="56.122" dur="0.134"> ထိုနေ့၏434နှင့်5နေ့များသည်ကန္တာရ၌အဆုံး၌တည်သောနေ့၏334နှင့်5။ ဒီတော့သင်ပြောပြသည် </text>
<text sub="clublinks" start="56.256" dur="0.066"> နေ့၏ ၄၊၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ထိုအရာသည်တောင်ထိပ်တွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပြောသောအရာမှာ </text>
<text sub="clublinks" start="56.322" dur="0.201"> ဒီနေ့၏334နှင့်5မှာကွန်း။ ဒီတော့သင်ပြောသောအရာ </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.1"> နေ့၏434နှင့်5မှာကွန်း။ ဒီတော့သင်ပြောသောအရာပင် </text>
<text sub="clublinks" start="56.623" dur="0.1"> DAY ၏ ၄၊၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ပြိုကွဲသွားသောအရာဒါဆိုသင်ပြောသောအရာကဘာလဲ </text>
<text sub="clublinks" start="56.723" dur="0.1"> ဒီနေ့၏334နှင့်5မှာကွန်း။ ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုသင်ပြောသောအရာဘာလဲဒီတော့ဒီ </text>
<text sub="clublinks" start="56.823" dur="0.067"> DAY ၏ ၄၊၃ ၄ နှင့် ၅ တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကူစက်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုကြည့်လျှင်သင့်ကိုပြောပြသည့်အရာကဘာလဲ </text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.066"> DAY's434AND5ရဲ့ DOW က CONE SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO D D </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="1.535"> ဒီတော့ဘာလဲသင်ဤပြောပြသည်ပင်ဒီနည်းကိုဒီနည်းကို IS </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.167"> ဒီတော့ဘာလဲဒီနည်းကိုဒီမျှော်လင့်ချက်မျှော်လင့်ထားဒီနည်းကိုပင် </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.1"> ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ထားသည့်တိုင်ဒီအရှိန်အဟုန်ဟာမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပင်။ </text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.134"> ဒီတော့ဘာလဲဒီအကြောင်းကိုဒီနည်းကိုဒီအတိုင်းမျှော်လင့်ထားတစ်နေရာရာမှာမျှော်လင့်ထား </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.066"> ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုဒီအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ထားသလောက်ပင်ဒီအကြောင်းကိုလှည့်ပတ်တစ်နေရာရာမျှော်လင့်ထား </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="0.234"> ဒီနည်းကိုဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲတစ်ဝိုက်တစ်နေရာ </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.1"> ဒီနည်းနဲ့ဒီမုန်တိုင်းကိုမျှော်လင့်ထားမိတယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="59.292" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE BEACH ပတ်ပတ်လည်နေရာဒေသကိုမျှော်လင့်မထား </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.1"> ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.1"> ဒီနည်းနဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာမျှော်လင့်မထားသင့်သေးတဲ့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်အရာ </text>
<text sub="clublinks" start="59.626" dur="0.066"> ဒီနည်းကိုမမျှော်လင့်ဘဲ MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်တွေ့ကြုံရသည့်အတိုင်းအလုပ်ပြီးမြောက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="59.692" dur="0.167"> MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခြင်း </text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="0.134"> MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်နောက်လမ်း၌အလုပ်လုပ်ရန် </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိလမ်းခရီးတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="2.536"> MYRTLE ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့်အရှေ့ဘက်ဖြတ်ကျော်လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း </text>
<text sub="clublinks" start="62.662" dur="0.067"> မျှော်လင့်ထားသည့်နေရာတစ်ဝိုက် MYRTLE BEACH နှင့်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်ကူးသန်းသွားလမ်း၊ </text>
<text sub="clublinks" start="62.729" dur="0.267"> MYRTLE BEACH ပြီးတော့အဲဒီလမ်းကအရှေ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးသွားတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.133"> MYRTLE BEACH AND THORS AND WILLOW CAROLINA အရှေ့ပိုင်းဖြတ်သန်းလမ်း၊ </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.067"> MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WORL CAROLINA ဖြတ်ပြီးလမ်းဖွင့်မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.133"> MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WORL CAROLINA ဖြတ်ပြီးလမ်းဖွင့်မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="63.329" dur="0.101"> MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WOROL CAROLINA ဖြတ်ကျော်ပြီးလမ်းဖွင့်တယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.133"> MYRTLE BEACH AND THILL AND WORS သည်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းဖွင့်ပြီး ၁ တွင် ၁ ခုရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.067"> MYRTLE BEACH AND THILL AND THELL AND THELL AND THELL AND THELL AND THR AND TRAVEL MYRTLE BEACH AND THILL AND THORS AND WORAL CAROLINA အရှေ့ဘက်ဖြတ်ကျော်လျှောက်လမ်း၊ </text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.233"> အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကာရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကူးတဲ့လမ်း၊ ၃ တွင် ၁ ယောက်ရှိတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="63.863" dur="0.134"> အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကာရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကျော်တဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှာ ၁ ခုရှိတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.067"> အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကူးတဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှ ၁ ခုရရှိနိုင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="64.064" dur="0.1"> အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကျော်တဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှ ၁ ခုရရှိနိုင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကာရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ပြီးသွားတဲ့လမ်း၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုမှ ၁ ခုရှိတယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="1.836"> ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> ကယ်ရိုလိုင်းနား, အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.033"> ကယ်ရိုလိုင်းနား, အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည်။ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="0.1"> ကယ်ရိုလိုင်းနား, အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည်။ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.134"> ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခု ရှိ၍ ၎င်းတို့အပြင်ဘက်ရှိအရာ </text>
<text sub="clublinks" start="66.466" dur="0.067"> ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အခွင့်အလမ်း ၃ ခုတွင် ၁ ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အပြင်ဘက်ရှိအပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="66.533" dur="0.2"> အခွင့်အလမ်းကအိုင်တီရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပြင်ကွေး၏အပြင်ဘက်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> အခွင့်အလမ်းအိုင်တီရဲ့တစ်နေရာရာရဲ့အပြင်ဘက်တွင် .ES ၏အပြင်ဘက် </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.1"> ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်း။ </text>
<text sub="clublinks" start="66.933" dur="0.134"> ဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုအခွင့်အလမ်း။ </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.133"> အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်တွင်ရှိ။ အော။ ဒီတော့နှင့်ပင်လျှင် </text>
<text sub="clublinks" start="67.2" dur="0.133"> အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိသူများရဲ့အပြင်ဘက်မှာ။ ဒီတော့ပင်လျှင်ပင် </text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="3.003"> အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပြင်ကအပြင်။ ဒီတော့လျှင်ပင်ပင် </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> အခွင့်အလမ်း IT ဒီဟာကိုရဲ့တစ်နေရာရာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပြင်ကအပြင်။ ဒီတော့၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင်။ </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.067"> အခွင့်အလမ်းကဒီနေရာမှာတစ်နေရာရာရဲ့အပြင်ဘက်တွင်အပြင်ဘက်။ ဒီတော့၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင် </text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.2"> တစ်နေရာရာ၏အပြင်ဘက်တွင် CONE .SO AND အိုင်တီ၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင် </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.1"> တစ်နေရာရာ၏အပြင်ဘက်တွင်။ EE .SO AND အိုင်တီက Cone ၌တည်ရှိ၏လျှင်ပင် </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> တစ်စုံတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာ။ ကံဆိုးတယ်။ တောင်မှဒီဟာကကုန်းအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.1"> တစ်စုံတစ်ခုသောအပြင်ဘက်တွင်ဒီ့အောက်မှာ .SO နှင့်ပင်အိုင်တီအောက်မှာကန်းထဲမှာပါလျှင်တောင်မှ </text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.134"> တစ်စုံတစ်ခုသောအပြင်ဘက်တွင်။ ။ ဒီနည်းကိုအောက်မှာဖော်ပြထားသော CONE ၌တည်၏။ ဒီနည်းကိုပင်လျှင်အိုင်အောက်၌တည်ရှိ၏လျှင် </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.1"> တစ်စုံတစ်ခုသောအပြင်ဘက်တွင်။ ဒီနည်းကိုက CONE ၌တည်ရှိ၏ဆိုပါကပင်။ </text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.133"> အပြင်ဘက်မှာတစ်နေရာရာ။ ကံဆိုးတယ်။ ဒီနည်းက CONE ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> တစ်နေရာရာအခြားအပြင်ဘက်မှာ။ ဒီနည်းကိုကဒီထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးဒီနည်းကိုက CONE .SO နှင့်ပင်လျှင်ဒါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="3.203"> .SO AND ပင်အကယ်။ အိုင်အောက်တွင်ရှိလြှငျဤမျှလောက်မဟုတ်ပါဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> .SO AND ရင်ထဲတွင်ရှိလျှင်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောဒါမပါအောက်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.134"> .SO AND ရင်ထဲတွင်ရှိလျှင်တောင်မှကွဲပြားခြားနားသောဤမျှလောက်မပါအောက်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.133"> .SO AND ရင်ထဲကပင်လျှင်ဤသည်အောက်မှာကွဲပြားခြားနားသောအများကြီးကွာခြားချက်မပါအောက်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="74.974" dur="0.134"> .SO AND ရင်ထဲကပင်လျှင်ဤသည်အောက်မှာကွဲပြားခြားနားသောဤမျှလောက်ကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ပါဘူးအောက်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.1"> .SO AND တောင်မှအကယ်။ အိုင်အောက်တွင်ရှိလြှငျ, ဒီထဲကအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ပါဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> .SO AND ရင်ထဲကပင်လျှင်, အကယ်။ အိုင်အောက်၌ကွဲပြားခြားနားသောအခြမ်းကိုချွတ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.167"> Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ </text>
<text sub="clublinks" start="75.442" dur="0.066"> Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ SO </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.1"> Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ SO အိုင်တီ </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.134"> Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ ဒါအိုင်တီလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="75.742" dur="0.133"> Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ ဒါကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="0.134"> Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ SO အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.067"> Cone အိုင်တီဒီအများကြီးနဲ့မထူးခြားပြီးဘေးထွက် OFF ။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.2"> ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.1"> ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ထို့ကြောင့်အိုင်တီသည်အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ရောက်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="1.568"> ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.133"> ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ဒါကြောင့်အိုင်တီအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="78.244" dur="0.067"> ဘေးဖယ် OFF ကွဲပြားခြားနား။ ထို့ကြောင့်အိုင်အိုင်ရှိအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.2"> ထို့ကြောင့်အိုင်အိုင်ရှိအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.067"> ထို့ကြောင့်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> ထို့ကြောင့်အိုင်အရှေ့အိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.134"> ထို့ကြောင့်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ရေအောက်ရှာဖွေမှုသည် ပိုမို၍ ပိုမို၍ ရနိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="78.812" dur="0.2"> ထို့ကြောင့်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်၊ ရေတံခွန်သည်နောက်ထပ်နှင့် ပို၍ အလားအလာရှိနိုင် </text>
<text sub="clublinks" start="79.012" dur="0.067"> ထို့ကြောင့်ရေတံခွန်အတွက်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည်၊ အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့် ပိုမို၍ ကြည့်ရှုရန် </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.2"> ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ပို။ ပို။ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.1"> ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းရိုးတန်းသည်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ချနိုင်ပါသည် </text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.903"> ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေမြေအောက်အထူးသဖြင့်ဖြတ်ကျော်နှင့်ပို။ ပို။ ကြည့်ရှုနိုင် </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.133"> ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းရိုးတန်းသည်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ပို၍ နှင့် ပို၍ ပို၍ ကြည့်နိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.134"> ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေမြေအောက်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းတစ်လျှောက်တွင်အထူးသဖြင့် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="82.549" dur="0.066"> ရေတံခွန်အတွက်ကမ်းခြေအထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) အထူးသဖြင့်အောက်တွင် ပိုမို၍ ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="82.615" dur="0.201"> အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) ပုံမှန်အားဖြင့်ဆင်းသက်လာနိုင်သည့်နောက်ထပ်နှင့်ပိုသောအရာများ </text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.166"> အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) တောင်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်နောက်ထပ်နှင့် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.167"> အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတစ်လျှောက်တွင်နောက်ထပ်နှင့်ပိုသော </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.134"> အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးစီးလာတဲ့ပိုပိုပြီးပိုများပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="0.066"> အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်း (သို့) တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကိုဖြတ်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသလား </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.301"> မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားဖြတ်ကျော် </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.033"> မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.067"> မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ က </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.067"> မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ အများကြီး </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="2.736"> မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ အမြောက်အများ </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.066"> မြောက်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းသို့မဟုတ်တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တက်လာသည်။ မေးခွန်းများ </text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.234"> တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ မေးခွန်းများ </text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ ဆက်လက်မေးခွန်းများအများကြီး </text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.134"> တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်တဲ့မေးခွန်းများအများကြီး </text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများ </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.1"> တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများစွာရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း။ သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်နိုင်တဲ့မေးခွန်းများ </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> ယုံကြည်မှု။ သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်နိုင်တဲ့မေးခွန်းများ </text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.2"> ယုံကြည်မှု။ အသေးစားအပြောင်းအလဲများကြီးကြီးမားမားလုပ်နိုင်တဲ့မေးခွန်းများ </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.1"> ယုံကြည်မှု။ သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများကကြီးမားသောကွဲပြားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="87.787" dur="2.169"> ယုံကြည်မှု။ အသေးအဖွဲပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများကဒီမှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="89.956" dur="0.134"> ယုံကြည်မှု။ အသေးအဖွဲပြောင်းလဲမှုများကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများအမြောက်အများဤနေရာတွင်အကြီးအကျယ်ကွဲပြားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.066"> ယုံကြည်မှု။ အသေးစားအပြောင်းအလဲများမှကျန်ရှိနေသေးသောမေးခွန်းများစွာသည်ကြီးမားသောကွဲပြားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="90.156" dur="0.267"> အသေးစားအပြောင်းအလဲများအားလုံးဒီမှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="90.423" dur="0.134"> အသေးစားအပြောင်းအလဲများကို SPAGHETTI အားလုံးဒီမှာကြီးမားတဲ့မတူကွဲပြားမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.066"> အသေးစားအပြောင်းအလဲများသည် SPAGHETTI မော်ဒယ်များအားလုံး၌ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.167"> အသေးစားအပြောင်းအလဲများသည်ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့် SPAGHETTI မော်ဒယ်များအားလုံးဒီမှာပါ </text>
<text sub="clublinks" start="90.79" dur="0.067"> အသေးစားအပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤကွန်ပြူတာသည် SPAGHETTI ပုံစံများအားလုံး </text>
<text sub="clublinks" start="90.857" dur="0.234"> ဒီမှာကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများမှာကွန်ပျူတာများဖြစ်သော SPAGHETTI ပုံစံများဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားချက်ဒီမှာမော်ဒယ်လ်များဖြစ်သော SPAGHETTI မော်ဒယ်များအားလုံး </text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.1"> ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမှာကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များမှထုတ်လုပ်သော SPAGHETTI MUDELL များ </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.067"> ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမှာဒီဂျစ်တယ်တီထွင်ထားသော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ။ </text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.167"> ဒီနည်းနှစ်ခုလုံးမှကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များဖြစ်သော SPAGHETTI MUDELL များအားလုံးသည်ကြီးမားသောကွဲပြားမှုများဒီမှာရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.067"> ဒီကွဲပြားမှုနှစ်ခုလုံးမှဒီဂျစ်တယ်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိဒီဂျစ်တယ်ကွဲပြားခြားနားသော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ။ </text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.166"> ဒီနည်းကိုနှစ်ခုစလုံးမှစတီထွင်သော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.101"> SPAGHETTI MODELS ဒီနည်းကိုဒီနေ့မွန်းတည့်မှပေးသည် </text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="2.302"> ဒီနည်းကိုရောဒီနည်းကိုရောကွန်ပျူတာရဲ့ပုံစံတွေပါတဲ့စပဂတ်တီပုံစံတွေ။ </text>
<text sub="clublinks" start="94.127" dur="0.133"> ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ပြီးနောက်ဒီစက်တွေကကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့ SPAGHETTI ပုံစံများ </text>
<text sub="clublinks" start="94.26" dur="0.267"> ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနှင့်ဒီနေ့ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုမှကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များဖြစ်သော SPAGHETTI ပုံစံများနှင့် </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.067"> ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနှင့်ဒီမွန်းလွဲပိုင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များမှသော SPAGHETTI မော်ဒယ်များ </text>
<text sub="clublinks" start="94.594" dur="0.167"> ဒီနည်းကိုနှစ် ဦး စလုံးမှညနေပိုင်းနှင့်ဤနေ့လည်နှင့်အဖွဲ့ဝင် </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.067"> ဒီနည်းကိုနှစ် ဦး စလုံးမှညနေပိုင်းနှင့်ဒီနည်းကိုပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင် </text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.133"> ဒီနည်းကိုနှစ် ဦး စလုံးမှညနေပိုင်းနှင့်ဒီနည်းကိုပြီးနောက်နှင့်အဖွဲ့ဝင် </text>
<text sub="clublinks" start="94.961" dur="0.167"> ဒီနည်းနဲ့ဒီမနက်ခင်းနဲ့မွန်းတည့်ပြီးနောက်မှရုံးအရာရှိများ </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> ဒီမနက်ခင်းနဲ့ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနဲ့ရုံးဖွင့်လှစ်မှုအဖွဲ့ဝင် </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> ဒီမနက်ခင်းနဲ့ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းနဲ့ရုံးဖွင့်လှစ်မယ့်သူရဲ့ပုံစံ။ </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> ဤနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဖွဲ့ဝင် </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်၏အဖွဲ့ဝင် </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အကြောင်း </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="1.902"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်ခင်းနှင့်တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အဖွဲ့ဝင်အကြောင်း </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.267"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်နှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဲဒီမှာ၌ရှိ၏။ </text>
<text sub="clublinks" start="97.797" dur="0.134"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်နှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဲဒီမှာ၌ရှိ၏။ SO </text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> ပြီးနောက်ဒီနည်းကိုနေ့လည်နှင့်တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်အဲဒီမှာ၌ရှိ၏။ SO အိုင်တီပါပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.167"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီပါပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.067"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ ဒါအိုင်တီ ON </text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.133"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ ဒါအိုင်တီပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.101"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက်တွင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="98.465" dur="0.033"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက် EDGE </text>
<text sub="clublinks" start="98.498" dur="0.1"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက် EDGE </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.1"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ SO အိုင်တီအရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.067"> တရားဝင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေအများကြီးရှိ၏။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="98.765" dur="0.2"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.067"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.067"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီနည်းကိုခေါ်ဝေါ်သောအရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="2.402"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ။ </text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.134"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ။ SO </text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.067"> အဲဒီမှာ Right ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ရာ၏အရှေ့ဘက် EDGE ပေါ်မှာ။ ထပ်ထပ် </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.167"> ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ် </text>
<text sub="clublinks" start="102.102" dur="0.133"> ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ငါထပ်ထပ်, ငါ </text>
<text sub="clublinks" start="102.235" dur="0.133"> ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ်ငါထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="102.368" dur="0.134"> ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ်ငါထင်ခဲ့တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="102.502" dur="0.133"> ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ထပ်ထပ်ငါသူတို့ထင်ကြလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.1"> ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ဒီတော့ထပ်, ငါသူတို့ထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="102.735" dur="0.067"> ငါတို့ဒီနေရာမှာဒီနည်းကိုခေါ်ဆိုရာ၏အရှေ့ဘက် Edge တွင်။ ဒီတော့ထပ်ငါငါသူတို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="102.802" dur="0.2"> ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့ထပ်ငါငါသူတို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.002" dur="0.034"> ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့ထပ်ငါငါသူတို့ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.036" dur="0.1"> ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒါကြောင့်ငါပြန်စဉ်းစား, သူတို့ပြန်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.1"> ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့ထပ်, ငါသူတို့ပြန်သွားရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.236" dur="0.133"> ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့နောက်တဖန်, ငါသည်သူတို့နောက်တဖန်အိုင်တီရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.067"> ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့နောက်တဖန်သူတို့ကိုပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.067"> ကွင်းပေါ်မှာဒီနည်းကိုခေါ်ပါ။ ဒီတော့နောက်တဖန်ငါရှိသည်သောသူတို့ကိုပြန်စဉ်းစား, အိုင်တီပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.503" dur="0.2"> , ငါသည်သူတို့ပြန်မယ်လို့အိုင်တီပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.067"> , ငါသည်သူတို့ထင်ကြလိမ့်မည်ဟုသောအရာကိုပြန်ပြန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="103.77" dur="1.301"> သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်သူတို့ကိုခဲ့နောက်မှရွှေ့ </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> , ငါသူတို့လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပျက်ကတည်းကနောက်တဖန်ရွှေ့ဖို့လေ့လိမ့်မယ်ထင် </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.133"> သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွစျခဲ့ပေမယ့် </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.134"> သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ပါပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="105.472" dur="0.066"> သူတို့ကိုငါထင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်, သူတို့ကိုပြန်သွား </text>
<text sub="clublinks" start="105.538" dur="0.167"> အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့ကဖွင့် </text>
<text sub="clublinks" start="105.705" dur="0.067"> အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့က OFF ဖွင့် </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> အိုင်တီပြန်ရွှေ့ပါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့အဘို့ဖွင့် </text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ IF </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.1"> အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ အိုင်တီ IF </text>
<text sub="clublinks" start="106.206" dur="0.133"> အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ လုပ်ရင် </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.067"> အိုင်တီနောက်သို့ MOVE ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေမယ့်သူတို့အခုအချိန်မှာ OFF ဖွင့်။ အကယ်၍ IT လုပ်လျှင် </text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="2.836"> အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ အကယ်၍ IT လုပ်လျှင် </text>
<text sub="clublinks" start="109.242" dur="0.133"> အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ နည်းနည်းလုပ်ရင် </text>
<text sub="clublinks" start="109.375" dur="0.101"> အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.133"> အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ နည်းနည်းလေးသေးဘူးဆိုရင် </text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.133"> အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ အနည်းငယ်သာလုပ်နိုင်လျှင် </text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.067"> အဆိုပါလမ်းကြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကယခု OFF OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.2"> ယခု FOR OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="110.009" dur="0.034"> ယခု FOR OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင်ကုန်းတွင်းပိုင်းလိုပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.1"> ယခု FOR OFF ။ ဒီနည်းကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ရင် INLAND ကဲ့သိုငါတို့လိုပိုသေးတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ယခု FOR OFF ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်နည်းနည်းလေးမှနည်းနည်းလေးလုပ်မိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောကုန်းတွင်းပိုင်းမြေများကဲ့သို့ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> ယခု FOR OFF ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သေးငယ်သောအိတ်ငယ်တစ်ခုလုပ်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအခြေအနေကဲ့သို့ပင်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ပိုမိုသော </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.066"> ယခု FOR OFF ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သေးငယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွေးတောမှုများကဲ့သို့သောကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများ၌ပိုမိုများပြားသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> WE အနည်းငယ်သာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသေးငယ်တဲ့ INITE BIT ကျနော်တို့လက်ရှိစဉ်းစားနေကြသည် </text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသည့်နည်းနည်းလေးသေးငယ်သောကုန်းတွင်းပိုင်း BIT </text>
<text sub="clublinks" start="110.81" dur="2.703"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသောနည်းနည်းလေးသေးငယ်သောကုန်းတွင်းပိုင်း BIT </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.167"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိစဉ်းစားနေသောနည်းနည်းလေးသေးသေးလေးကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်ပိုမိုနည်းနည်းပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.167"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုခေတ်တွင်တွေးတောဆင်ခြင်မှုများကဲ့သို့သောသေးငယ်သောသေးငယ်သောကုန်းတွင်းပိုင်းအပိုင်းအစများပိုမိုနည်းပါးလာသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.2"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲ၊ </text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရိုးရိုးလေးစီးဆင်းနေပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="114.114" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရထားစီးဆင်းမှုရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.133"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရိုးရိုးလေးစီးဆင်းနေပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်ရှိကြသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ရိုးရိုးလေးစီးသွားသည်၊ အချို့ကိစ္စများရှိခဲ့သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.414" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲ၊ ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုတွေရှိတယ်၊ တချို့မေးခွန်းတချို့ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.514" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွေးတောနေသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရိုးရိုးလေးပြောင်းလဲသွားပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများရှိကြသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.2"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများနည်းနည်းမှနည်းနည်းပါးပါးရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.781" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများနှင့်လိမ်လည်မှုများရှိကြသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများ၊ လိမ်ညာသည့်နေရာအချို့ရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="114.981" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရိုးရိုးရိုးရိုးလေးစီးနင်းမှုရှိခဲ့ပြီ၊ အချို့ကိစ္စများရှိခဲ့ဖူးသည်၊ အချို့သောအနိမ့်အလတ်အစက်များသည် </text>
<text sub="clublinks" start="115.081" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများရှိကြသည်၊ အချို့သောအနိမ့်အလတ်အစက်များသည်ရေလွှမ်းမိုးမည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရိုးရထားစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ပြီးပြီ၊ အချို့မေးခွန်းများရှိကြသည်၊ အချို့သောအနိမ့်အလတ်အစက်များသည်ရေကြီးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလိမ်ညာသည့်နေရာများသည်ရေလွှမ်းမိုးခံရလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="2.335"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်မေးခွန်းအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သာရေလွှမ်းနိုင်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.234"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.133"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ THE </text>
<text sub="clublinks" start="118.184" dur="0.134"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ လေ </text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.133"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ လေတိုက်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိစ္စအချို့ ရှိ၍၊ အနည်းငယ်သောလောင်ကျွမ်းသောနေရာများသည်အနည်းငယ်သောရေကိုစီးစေလိမ့်မည်။ လေလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="118.518" dur="0.267"> လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.133"> လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြMနာဖြစ်လိမ့်မည်, \_ t </text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="2.036"> လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်စားမှုပြMနာဖြစ်နိုင်သည်, ဖြစ်နိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="121.054" dur="0.067"> လိုင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ် BIT ရေလိမ့်မယ်။ လေတိုက်စားမှုပြMနာဖြစ်လိမ့်မည်, ပင်ဖြစ်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.266"> အနည်းငယ်။ လေတိုက်စားမှုပြMနာဖြစ်လိမ့်မည်, ပင်ဖြစ်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="121.387" dur="0.067"> အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြPROနာဖြစ်လိမ့်မည်, ပင်နယ်နိမိတ်ဖြစ်နိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.034"> အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြPROနာဖြစ်လိမ့်မည်, တောင်မှနယ်နိမိတ်ထိတွေ့နိုင် </text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.1"> အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြMနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီး၊ </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.133"> အနည်းငယ်။ လေတိုက်ခတ်မှုပြPROနာဖြစ်နိုင်သော်လည်းအနည်းငယ်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေနိုင်သော်လည်း </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.067"> အနည်းငယ်။ လေတိုသည်ပြPROနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအနည်းငယ်ပိုမြင့်သောနယ်နိမိတ်နှင့်ထိစပ်နေနိုင်သော်လည်း </text>
<text sub="clublinks" start="121.788" dur="0.2"> အလယ်အလတ်ပြPROနာ, တောင်မှအနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေစေနိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="121.988" dur="0.067"> အလယ်အလတ်ပြPROနာ, ဒီထက်နည်းအနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ဖြစ်နိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.1"> အလယ်အလတ်ပြနာ, ဒီထက်အနည်းငယ်မြင့်သောအပေါ်နယ်နိမိတ်ရင်တောင်ဖြစ်နိုင် </text>
<text sub="clublinks" start="122.155" dur="0.167"> အလယ်အလတ်ပြPROနာ, ဒီနည်းကိုဒီထက်နည်းနည်းမြင့်မားအပေါ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်စေခြင်းငှါ </text>
<text sub="clublinks" start="122.322" dur="0.1"> မျက်မှောက်ခေတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုထက်နိမ့်သောအမြင့်ဆုံးနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေလျှင်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="122.422" dur="0.067"> မျက်မှောက်ခေတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုထက်နည်းသောအနိမ့်ပိုင်းနှင့်ထိစပ်နေသည့်တိုင်ပြောင်းလဲမှုရှိသောပြMနာ, ဖြစ်နိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="122.489" dur="0.166"> အနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောဒီရေလှိုင်းကြီးများသည် </text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="2.703"> ဒီထက်ပိုမြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="125.358" dur="0.134"> ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဒီရေဒီယိုရေဒီယိုကမပြောင်းလဲဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးမှုဟာများများစားစားရှိနိုင်ပြီး </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> အနည်းငယ်မြင့်မားသောနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောဒီရေလွှမ်းမိုးမှုသည်အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.3"> သောဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်တိုနာဒိုဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.1"> သောဒီရေဒီရေလွှမ်းမိုးမှုသည်အလယ်အလတ်နှင့်ရေပန်းစားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="126.092" dur="0.034"> သောဒီရေဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်မီပြီးတိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်လိမ့်မည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.066"> သောဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်အလတ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော TORNADO ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်လိမ့်မည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.067"> သောဒီရေဒီရေလွှမ်းမိုးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင်ရှိပြီး၊ </text>
<text sub="clublinks" start="126.259" dur="0.067"> သောဒီရေဒီယိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင်ရှိပြီး၊ </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.2"> အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေ WE ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="126.526" dur="0.1"> အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="126.626" dur="0.067"> အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျနော်တို့ညာဘက်လက်၌ရှိလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="126.693" dur="0.066"> အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျနော်တို့လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="126.759" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ျာဘက်၌ရှိလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="1.802"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ျာဘက်၌ရှိလိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="128.628" dur="0.133"> အလယ်အလတ်နှင့်လေဆင်နှာမောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်ုပ်တို့သည်မုန်တိုင်း၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> အလယ်အလတ်နှင့်တိုနာဒိုဖြစ်နိုင်ခြေကျွန်ုပ်တို့သည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.234"> ကျနော်တို့ Storm မုန်တိုင်း၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.033"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ </text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည် STORM ၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.1"> ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိနိုင်ပြီးတိုတိုတို့ပဲ။ </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်သောလမ်း၌ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သဖြင့်တိုတိုနှင့်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.067"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်သောလမ်း၌ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့တိုတိုနှင့်တစ်နည်းနည်းဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="0.267"> STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုနှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="129.796" dur="0.067"> STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုနှင့်အထီးကျန်ဖြစ်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.033"> STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုနှင့်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေမယ့်ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.133"> STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သို့သော်ငါတို့မူကား </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.067"> STORM ၏လက်ျာဘက်၌သူတို့သည်တိုတိုတုတ်တုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လိုသည် </text>
<text sub="clublinks" start="130.096" dur="0.3"> သူတို့ကအတိုချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်တစ်နည်းနည်းနဲ့အထီးကျန်ပေမယ့်ငါတို့လို </text>
<text sub="clublinks" start="130.396" dur="2.403"> သူတို့သည်တိုတိုနှင့်တစ်စုံတစ်ရာအဖြစ်သီးခြားနေရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.133"> သူတို့ကအတိုချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်တစ်နည်းနည်းနဲ့သီးခြားဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကို definitiely ရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="132.932" dur="0.167"> သူတို့ကအတိုချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထီးကျန်ဖြစ်ရသော်လည်းအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အဓိပ္ပာယ်မဲ့လိမ့်မည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.067"> သူတို့ဟာတိုတောင်းပြီးသီးခြားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပေမယ့်အချို့သောဖောင်ဒေးရှင်းတွေရှိခဲ့မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="133.166" dur="0.233"> သီးခြားဖြစ်ပေမယ့်ကျနော်တို့အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> သီးခြားဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်ုပ်တို့ကအပြင်းအထန်တာ ၀ န်ထမ်းအချို့ကိုဖြတ်ကျော်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.134"> သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်ကျော် ၀ င်ရောက်စီးနင်းနိုင်သည့်အချို့သောကုန်တင်သင်္ဘောများရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.033"> သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ဒေသတွင်းဖြတ်ကျော်အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.133"> သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ဒေသတွင်းဖြတ်ကျော်အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်။ SO </text>
<text sub="clublinks" start="133.766" dur="0.067"> သီးခြားဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ဒေသတွင်းဖြတ်ကျော်အချို့သောလေဆင်နှာမောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်။ ငါတို့ပါပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="0.2"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ငါတို့ပါပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="0.067"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒီတော့ငါတို့သွား </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.067"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒီတော့ငါတို့သွားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="134.167" dur="0.133"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒီတော့ငါတို့ပြောပါမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="134.3" dur="0.067"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ MODERATE ပြောပါမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="134.367" dur="0.1"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ MODERATE ပြောပါမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="134.467" dur="0.067"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်ဝှမ်းတွင်အချို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအချို့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသို့ပြောပါမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="134.534" dur="2.436"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသို့ပြောပါမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.133"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောရန်သွားတော့မည် </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="0.134"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောရန်သွားတော့မည် </text>
<text sub="clublinks" start="137.237" dur="0.166"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ဒါကြောင့်ငါတို့အဘို့အမြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့ MODERATE ပြောပါမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.201"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲရန်ပြောပါတော့မည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="137.604" dur="0.066"> တိုင်းဒေသကြီးတစ်လွှား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလဲရန်ပြောပါတော့မည်။ ထပ် </text>
<text sub="clublinks" start="137.67" dur="0.234"> ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ် </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, သော </text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.133"> ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, သော AS </text>
<text sub="clublinks" start="138.104" dur="0.167"> ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, သောအိုင်တီ </text>
<text sub="clublinks" start="138.271" dur="0.133"> ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, အိုင်တီလွှဲပြောင်းကဲ့သို့ </text>
<text sub="clublinks" start="138.404" dur="0.067"> ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, အိုင်တီဖြတ်သန်းသွားသည်တဆင့် </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.067"> ဒီစနစ်အတွက်မြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့အလယ်အလတ်အဆင့်သို့ရောက်အောင်သွား။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS က </text>
<text sub="clublinks" start="138.538" dur="1.702"> သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS က </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှည့်လည် AS အလွန်သေးငယ်သောမှတဆင့် </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.133"> သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့်ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ပေမယ့် </text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.134"> သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS ရဲ့သေးငယ်တဲ့ပေမယ့်ကုန်းတွင်းပိုင်း </text>
<text sub="clublinks" start="140.607" dur="0.133"> သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့် AS ရဲ့သေးငယ်တဲ့မှတဆင့်ပေမယ် INLAND IF </text>
<text sub="clublinks" start="140.74" dur="0.134"> သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီလှိမ့်ကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့မှတဆင့်ပေမယ့် INLAND အိုင်တီ </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.066"> သောစနစ်အဘို့သက်ရောက်မှု။ ထပ်, အိုင်တီ AS လှိမ့်ချမှတဆင့်သေးငယ်တဲ့ပေမယ့် INLAND အကယ်။ ပိုနီးကပ်လာလျှင် </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.167"> , အိုင်တီအိုင်တီလွှဲပြောင်း AS နည်းနည်းပေမယ့်အိုင်တီနီးကပ်လာလျှင် INLAND </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.067"> , အိုင်တီအိုင်တီလွှဲပြောင်း AS နည်းနည်းပေမယ့်ကပိုနီးကပ်လာလျှင် INLAND </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.167"> , အိုင်တီအိုင်တီလွှဲပြောင်း AS နည်းနည်းပေမယ့်အိုင်တီနီးကပ်လာလျှင် INLAND </text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.167"> အိုင်တီအိုင်တီလှည့်လည် AS အလွန်သေးငယ်သောမှတဆင့်အိုင်တီကမ်းရိုးတန်းနှင့်နီးကပ်လာလျှင် INLAND ။ </text>
<text sub="clublinks" start="141.508" dur="0.066"> အိုင်တီအိုင်တီလှည့်လည် AS အလွန်သေးငယ်သောမှတဆင့်အိုင်တီကမ်းရိုးတန်းနှင့်နီးကပ်လာလျှင် INLAND ။ ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="141.574" dur="0.234"> အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ ဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="141.808" dur="0.133"> အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ ပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="141.941" dur="0.067"> အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="142.008" dur="2.503"> အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.133"> အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါစကားပြောမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> အနည်းဆုံးပေမယ့်အိုင်ယာလန်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်လာလျှင်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါထပ်ပြောမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.2"> ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါထပ်ပြောမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.133"> ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ ငါအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းငါထပ်မံပြောမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.067"> ကမ်းရိုးတန်းသို့။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။ အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ညွှန်းများအကြောင်းထပ်မံပြော ဦး မည် </text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.2"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ညွှန်းများအကြောင်းထပ်မံပြော ဦး မည် </text>
<text sub="clublinks" start="145.578" dur="0.034"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ညွှန်းများအကြောင်းထပ်မံပြောမည် </text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="0.066"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါလာသောအခါငါကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.067"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="145.845" dur="0.067"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ AND </text>
<text sub="clublinks" start="145.912" dur="0.133"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ AND AS </text>
<text sub="clublinks" start="146.045" dur="0.067"> အရာဝတ္ထုများကိုပြောင်းလဲပါ။ ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်။ AND ငါ </text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.2"> ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ AND ငါ </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.1"> ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.034"> ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ AND ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ယူ </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="0.067"> ငါပြန်လာသည့်အခါအမျိုးမျိုးသောဇာတ်လမ်းများအကြောင်း။ AND ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ယူ </text>